3001s &quot;Ukholo Olusingatha Ubunzima&quot; noMfundisi uRick Warren images and subtitles
- Sawubona, wonke umuntu, nginguRick Warren, Umfundisi eSaddleback Church nombhali kwe- "Inhloso Eqhutshwe Impilo" nesipika kuhlelo lwe- "Daily Hope". Siyabonga ngokungena kulo msakazo. Uyazi, kuleli sonto lapha e-Orange County, California, uhulumeni wamemezela ukuthi bebevinjela yonke imihlangano yanoma uluphi uhlobo kuze kube sekupheleni kwenyanga. Uyemukelwa eSontweni leSaddleback ekhaya. Ngijabule ukuthi ulapha. Futhi ngizobe ngifundisa ngevidiyo phakathi kwamanje noma nini lapho le nkinga ye-COVID-19 iphela. Uyemukelwa eSontweni leSaddleback ekhaya. Futhi ngifuna ukuthi ungilandele masonto onke, ube yingxenye yalezi zinkonzo zokukhonza ndawonye. Sizoba nomculo futhi sikhonze ndawonye, futhi ngizobe ngikhipha izwi elivela eZwini likaNkulunkulu. Uyazi, njengoba bengicabanga ngalokhu, ngendlela, okokuqala ngidinga ukukutshela. Ngabona ukuthi bazovele basikhansele ukuhlangana. Futhi ngakho kuleli sonto, ngibe nes studio seSaddleback bathuthela egalaji lami. Empeleni ngithepha lokhu egaraji lami. Ithimba lami lobuchwepheshe Ngenani nina bafana, nithi sawubona wonke umuntu. (ehleka) Basizile ukuyihambisa lapha futhi bayisetha konke ukuze sikwazi ukukhuluma nawe masonto onke. Manje, njengoba bengicabanga ngalokho okufanele simboze phakathi nale nkinga ye-COVID-19, Ngokushesha ngacabanga ngencwadi kaJames. Incwadi kaJakobe iyincwadi encane kakhulu ngasekupheleni kweTestamente eNtsha. Kepha kuyasebenza futhi kuyasiza kakhulu, futhi le ncwadi ngiyibiza ngokuthi ukholo olusebenza lapho impilo ingasebenzi. Futhi ngicabange ukuthi uma kukhona okudingeka manje, Ngabe sidinga ukholo olusebenzayo lapho impilo ingasebenzi. Ngoba ayisebenzi kahle njengamanje. Futhi namhlanje, kuleli sonto, sizoqala uhambo ndawonye oluzokukhuthaza ngokusebenzisa le nkinga. Futhi angifuni uphuthelwe noma imiphi yale milayezo. Ngoba incwadi kaJakobe empeleni ihlanganisa eziyi-14 ezinkulu amabhlogo wokwakha, izimpikiswano eziyishumi nane zokuphila, Izindawo eziyi-14 yilowo nalowo kini osubhekane nakho empilweni yakho, futhi uzobhekana nakho ngokuzayo. Isibonelo, esahlukweni sokuqala sikaJames, ake nginike nje ukubukeza okuncane kwalencwadi. Izahluko ezine kuphela. Isahluko sokuqala, sikhuluma okokuqala ngobunzima. Futhi sizokhuluma ngalokho namhlanje. Iyini injongo kaNkulunkulu ngezinkinga zakho? Bese kukhulunywa ngokukhetha. Uyakha kanjani ingqondo yakho? Wazi kanjani ukuthi kufanele uhlale, uzohamba nini? Wazi kanjani okufanele ukwenze, uzenza kanjani izinqumo? Bese kukhulunywa ngesilingo. Futhi sizobheka ukuthi unqoba kanjani izilingo ezivamile empilweni yakho ebonakala iqhubeka nokwenza ukuthi wehluleke. Futhi-ke ikhuluma ngokuholwa. Futhi ikhuluma ngokuthi singabusiswa kanjani ngebhayibheli. Hhayi nje ukuyifunda, kepha ubusiswe yiyo. Lokho konke kusahluko sokuqala. Futhi sizobheka labo emavikini azayo. Isahluko sesibili sikhuluma ngobudlelwano. Sizobheka ukuthi ubaphatha kanjani abantu kahle. Futhi nabantu kufanele bahlale ekhaya, bonke emndenini ndawonye, ​​izingane, omama nobaba, futhi abantu bazothola izinhlungu zomunye nomunye. Lowo kuzoba ngumyalezo obalulekile ebudlelwaneni. Bese kukhulunywa ngokholo. Ngabe umethemba kanjani uNkulunkulu uma ungazizwa unjalo futhi uma izinto zihamba ngendlela engafanele? Lokho konke kusahluko sesibili. Isahluko sesithathu, sizoxoxa ngezingxoxo. Amandla engxoxo. Futhi lokhu kungenye yezindima ezibaluleke kakhulu Ebhayibhelini ukuthi uwuphatha kanjani umlomo wakho. Lokho kubalulekile ukuthi ngabe sisenkingeni noma cha. Bese kukhulunywa ngobungani. Futhi isinikeza imininingwane engokoqobo uzakhela kanjani ubungane obuhlakani futhi uvikele ubungane obungenangqondo. Lokho kusahluko sesithathu. Isahluko sesine siyingxabano. Futhi esahlukweni sesine, sikhuluma ngakho uzigwema kanjani izimpikiswano Futhi lokho kuzoba wusizo lwangempela. Njengoba kukhuphuka ukungezwani nokukhungatheka, njengoba abantu sebephelelwe ngumsebenzi, uzigwema kanjani izingxabano? Futhi-ke ikhuluma ngokwahlulela abanye. Ukuyeka kanjani ukudlala uNkulunkulu? Lokho kungadala ukuthula okukhulu ezimpilweni zethu uma besingakwenza lokho. Futhi-ke ikhuluma ngekusasa. Uhlela kanjani ikusasa? Lokho konke kusahluko sesine. Manje, esahlukweni sokugcina, isahluko sesihlanu, ngikutshelile kwakukhona izahluko ezine, empeleni zikhona izahluko ezinhlanu kuJakobe. Sizoxoxa ngemali. Futhi kukhuluma ngokuthi ungaba kanjani uhlakaniphile ngengcebo yakho. Futhi-ke sizobheka ukubekezela. Wenzani uma ulinda uNkulunkulu? Igumbi elinzima kakhulu ukuhlala kulo usegunjini lokulinda lapho usuphuthuma kanti cha akunjalo. Futhi-ke sizobheka umkhuleko, okuwumyalezo wokugcina esizowubheka. Uthandaza kanjani ngezinkinga zakho? Ibhayibheli lithi kunendlela yokuthandaza nokuthola izimpendulo, futhi kunendlela yokungathandazi. Futhi sizokubheka lokho. Manje namhlanje, sizovele sibheke amavesi ayisithupha okuqala yencwadi kaJakobe. Uma ungenalo iBhayibheli, khona-ke ngifuna ulilande ngaphandle kwale webhusayithi uhlaka, amanothi wokufundisa, ngoba wonke amavesi esiwawabhekile zikhona ohlwini lwakho. UJakobe isahluko sokuqala, amavesi ayisithupha okuqala. Futhi iBhayibheli likusho lokhu lapho likhuluma ngakho ukubhekana nezinkinga zakho. Okokuqala, uJakobe 1: 1 usho lokhu. UJakobe, inceku kaNkulunkulu neyeNkosi uJesu Kristu, ezizweni eziyi-12 ezihlakazekele phakathi kwezizwe, imikhonzo. Manje ake ngime lapha umzuzu bese ngithi lokhu kungeniswa okushayelwa phansi kakhulu yanoma iyiphi incwadi esebhayibhelini. Ngoba uyazi ukuthi wayengubani uJames? Wayengumnakwabo kaJesu. Ngabe usho ukuthini ngalokho? Kusho ukuthi wayeyindodana kaMariya noJosefu. UJesu wayeyindodana kaMariya kuphela. Wayengeyona indodana kaJosefa ngoba uNkulunkulu wayenguyise kaJesu. Kepha ibhayibheli lisitshela ukuthi uMariya noJoseph saba nezingane eziningi kamuva, futhi zize zisinikeze amagama abo. UJames wayengeyena umKristu. Wayengeyena umlandeli kaKristu. Wayengakholelwa ukuthi umnewabo wayenguMesiya phakathi nayo yonke inkonzo kaJesu. Wayengabaza. Futhi uzobona lokho, mfowethu omncane ongakholwayo kumfowethu osekhulile, kunjalo, lokho kuzocaca kahle. Yini leyenta Jakobe wakholwa kuJesu Khristu? Uvuko. Ngenkathi uJesu ebuya ekufeni wahambahamba UJakobe wambona ezinye izinsuku ezingama-40. waba yikholwa futhi kamuva waba ngumholi eSontweni laseJerusalema. Ngakho-ke uma noma ubani enelungelo lokushiya amagama, yilomlisa. Wayengasho nje, uJames, umgilwa owakhula noJesu. UJakobe, umfowabo kaJesu ngamzali munye. UJames, umngani kaJesu omkhulu ekhula. Lezo zinhlobo zezinto, kepha yena akazenzi. Umane athi uJames, inceku kaNkulunkulu. Akadonseli isikhundla, akakhuthazi ukuba kwakhe. Kepha bese evesini lesibili, uqala ukungena lo magazini wokuqala wenhloso kaNkulunkulu ezinkingeni zakho. Ake ngikufundele. Uthi, lapho zonke izinhlobo zezilingo hlanganisa ezimpilweni zakho, ungabacasuli njengabangeneleli, kepha mamukele njengabangani. Yazi ukuthi bazovivinya ukholo lwakho, futhi ukhiqize ngaphakathi kuwe ikhono lokukhuthazela. Kepha makuqhubeke lokho kuze kufike lokho kukhuthazela ukhule ngokugcwele, futhi uzoba ngumuntu wobuntu obuvuthiwe nobuqotho engenabala obuthakathaka. Lokho ukuhunyushwa kwePhillips kaJakobe isahluko sokuqala, amavesi amabili kuya kwayisithupha. Manje, uthi lapho zonke izinhlobo zezilingo zingena empilweni yakho futhi bayangena empilweni yakho, uthe, ungabacasuli njengabangeneleli, mamukeleni njengabangane. Uthi, unezinkinga, ujabule. Unezinkinga, thokozani. Unezinkinga, ukumamatheka. Manje, ngiyazi ukuthi ucabangani. Uyahamba, uyangidina? Kungani kufanele ngijabule nge-COVID-19? Kungani kufanele ngazamukele lezi zivivinyo empilweni yami? Kungenzeka kanjani lokho? Ukhiye walesi simo sonke sokulondolozwa isimo sengqondo esihle phakathi kwenhlekelele yizwi eliqaphelekayo, yizwi eliqaphelekayo. Uthe, lapho zonke lezi zinhlobo zezilingo hlanganisa ezimpilweni zakho, ungabacasuli njengabangeneleli, kodwa ubamukele njengabangane, bese uqaphela, uqaphele, beza ukuzohlola ukholo lwakho. Futhi-ke uyaqhubeka, lokho ozovele ukukhiqiza ezimpilweni zabo. Lokho akusho lapha ukuthi impumelelo yakho ekusingatheni amasonto aphambi kwethu kulesi bhubhane se-COVID-19 manje sekuzungeze umhlaba, futhi ngokwanda Izizwe ziyavala, futhi ziyavalwa izindawo zokudlela futhi bavala izitolo, futhi bavala izikole, futhi bavala amasonto, futhi bavala noma iyiphi indawo lapho abantu bebuthana khona, futhi njengalapha e-Orange County, lapho esingavunyelwe khona ukuhlangana nanoma ngubani kulenyanga. Uthi, impumelelo yakho ekusingatheni lezi zinkinga kuzonqunywa ngokuqonda kwakho. Ngokuqonda kwakho. Futhi ngesimo sakho sengqondo ngalezi zinkinga. Yilokho okwaziyo, yilokho okwaziyo. Manje, into yokuqala kule ndima ngifuna ukuba uyiqaphele ukuthi uNkulunkulu usinikeza izikhumbuzo ezine ngezinkinga. Ungafuna ukubhala lezi phansi. Izikhumbuzo ezine ngezinkinga empilweni yakho, okubandakanya ubunzima esibhekene nabo njengamanje. Okokuqala, uthi okokuqala, izinkinga azinakugwenywa. Izinkinga azinakugwenywa. Manje, ukusho kanjani lokho? Uthi, lapho kuza zonke izinhlobo zezilingo. Akasho uma zonke izinhlobo zezilingo zivela, usho ukuthi zizokwenzeka nini. Ungathembela. Leli akusilo izulu lapho konke kuphelele khona. Lona uMhlaba lapho yonke into ephukile. Futhi uthi uzoba nezinkinga, uzoba nobunzima, ungathembela kukho, ungathenga isitokhwe kuyo. Manje, lena akuyona into uJames athi yedwa. Kuyo yonke iBhayibhile kuyasho. UJesu wathi emhlabeni uzoba nezilingo nezilingo, futhi uyoba nosizi. Uthe uzoba nezinkinga empilweni. Manje kungani simangala lapho sinezinkinga? UPeter uthi ungamangali lapho udlula ekuvivinyweni ngomlilo. Uthe ungenzi sengathi yinto entsha. Wonke umuntu ubhekana nezikhathi ezinzima. Impilo inzima. Lokhu akulona izulu, lo nguMhlaba. Akekho umuntu ozivikelayo, akekho noyedwa, akekho owafakwa, akekho okhululwa. Uthi uzoba nezinkinga ngoba ayinakugwenywa. Uyazi, ngikhumbula ngesinye isikhathi lapho ngangisekolishi. Eminyakeni eminingi edlule, bengibhekana nakho ezinye izikhathi ezinzima ngempela. Futhi ngaqala ukuthandaza, ngathi, "Nkulunkulu, nginike ukubekezela." Futhi esikhundleni sezilingo ziba ngcono, baba zimbi kakhulu. Futhi-ke ngathi, "Nkulunkulu, ngidinga ukubekezela ngempela," futhi izinkinga zaba zimbi ngokwengeziwe. Futhi-ke ngathi, "Nkulunkulu, ngidinga ukubekezela ngempela," futhi baba sibi kakhulu. Kwakuqhubeka ini? Hhayi, ekugcineni ngabona ukuthi ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, Bengibekezelela kakhulu kunangesikhathi sokuqala kwami, ukuthi indlela uNkulunkulu wayengifundisa ngayo ukubekezela Kwakudlula kulobunzima. Manje, izinkinga azilona uhlobo oluthile lwezifundo ezikhethiwe ukuthi unokhetho okufanele uluthathe empilweni. Cha, bayadingeka, awukwazi ukuphuma kubo. Ukuze uthole iziqu esikoleni sempilo, uzohamba udlule esikoleni sokungqongqoza kanzima. Uzobhekana nezinkinga, azinakugwenywa. Yilokho iBhayibheli elikushoyo. Okwesibili okushiwo yiBhayibheli ngezinkinga yilokhu. Izinkinga ziyahlukahluka, lokho kusho ukuthi azifani zonke. Awutholi inkinga efanayo ngokulandelana. Uthola eziningi ezahlukahlukene. Hhayi ukuthi uthola ama-em, kodwa uthola ehlukile. Uthi lapho uvivinya, lapho unezinkinga zazo zonke izinhlobo. Ungakujikeleza lokho uma uthatha amanothi. Lapho zonke izinhlobo zezilingo zingena empilweni yakho. Uyazi, ngingumlimi, futhi ngake ngenza isifundo, futhi ngithole ukuthi uhulumeni lapha e-United States yahlukaniswa Izinhlobo ezingafani ezingama-205 zokhula. Ngicabanga ukuthi ama-80% awo akhula engadini yami. (ehleka) Imvamisa ngicabanga ukuthi lapho ngitshala imifino, Kufanele ngikhokhise ukungena kweWarren's Weed Farm. Kepha kunezinhlobo eziningi zokhula, futhi kunezinhlobo eziningi zezilingo, kunezinhlobo eziningi zezinkinga. Beza ngobukhulu bonke, beza ngemidwebo yonke. Kunokunambitheka okungaphezulu kwama-31. Leli gama lapha, zonke izinhlobo, lapho lisho khona kukhona zonke izinhlobo zezilingo empilweni yakho, empeleni esiGrekini kusho okuxubile. Ngamanye amagama, ziningi izithunzi zokucindezela empilweni yakho, ungavuma lokho? Kunemithunzi eminingi yokucindezela. Zonke azifani. Kukhona ukucindezela kwezezimali, kunokucindezela okuhlobene, kunokucindezelwa kwempilo, kukhona ukucindezela ngokomzimba, kunengcindezi yesikhathi. Ukhuluma ukuthi yonke imibala ehlukene. Kepha uma uphuma uyothenga imoto futhi ufuna umbala wesiko, khona-ke kufanele ulinde. Futhi-ke lapho kwenziwa, khona-ke uthola umbala wakho ngokwezifiso. Empeleni lelo igama elisetshenziswe lapha. Umbala wangokwezifiso, izilingo ezinhlobonhlobo empilweni yakho. UNkulunkulu ubavumela ngesizathu. Ezinye zezinkinga zakho zenziwa ngokwezifiso. Abanye babo sonke nje esibahlanganyele ndawonye, njengalesi, COVID-19. Kepha uthi izinkinga ziyahlukahluka. Futhi engikushoyo yilapho ukuthi ziyehluka ngobukhulu. Ngamanye amagama, banjani kanzima. Ziyahluka ngokuvama, futhi lokho kungakanani. Asazi ukuthi lokhu kuzogcina isikhathi eside kangakanani. Asazi ukuthi kuzoba nzima kanjani. Ngabona isibonakaliso ngolunye usuku esasithi, "Yonke imvula kumele ingene kukho konke impilo "kodwa lokhu kuyahlekisa." (ehleka) Futhi ngicabanga ukuthi leyo yindlela abantu abaningi bazizwa njengamanje. Lokhu kuyahlekisa. Izinkinga azinakugwenywa futhi ziyahlukahluka. Izinto zesithathu uJames azisho ngakho asishaqeki Izinkinga azilindelekile. Abalindeleki. Uthi lapho ukulingwa kuhlangana empilweni yakho, uma uthatha amanothi, ukokele lelo binzana. Bayangena empilweni yakho. Bheka, akukho nkinga esefika lapho uyidinga noma lapho ungayidingi. Kufika nje lapho ufuna ukuza. Lokho yingxenye yesizathu ukuthi kuyinkinga. Izinkinga ziza ngesikhathi esingahambisani kakhulu nazo. Wake wazizwa njengenkinga wangena empilweni yakho, uya, hhayi manje. Ngempela, njengamanje? Lapha eSaddleback Church, besisemkhankasweni omkhulu ukuphupha ngekusasa. Futhi ngokuzumayo i-coronavirus ishaya. Futhi ngiyahamba, hhayi manje. (chuckles) Hhayi manje. Wake waba nethayela elisicaba lapho usephuze? Awutholi uthayi osicaba lapho uthola isikhathi esiningi. Ushesha ukuya kwenye indawo. Kufana nokhula lwezingane engutsheni yakho entsha njengoba uphuma ngokuzibandakanya obalulekile kusihlwa. Noma uhlukanisa ibhulukwe lakho ngaphambi kokukhuluma. Empeleni kwenzeka kimi ngesinye isikhathi ngeSonto kade kwenzeka. Abanye abantu, banesineke kakhulu, abakwazi ukulinda umnyango ovunguzayo. Bafanele nje, kufanele bakwenze, Kufanele bakwenze manje, kufanele bakwenze manje. Ngikhumbula eminyakeni eminingi edlule ngangiseJapan, futhi ngangimi esitimeleni esingaphansi komgwaqo ukufika, futhi lapho kuvulwa, iminyango ivulekile, futhi insizwa yaseJapan ngokushesha uhlanza kimi njengoba ngangimi lapho. Futhi ngacabanga, kungani mina, kungani manje? Abalindeleki, beza uma ungadingi i-em. Awukwazi ukubikezela izinkinga empilweni yakho. Manje qaphela, ithi lapho zonke izinhlobo zezilingo, nini, akunakugwenywa, zonke izinhlobo, ziyahlukahluka, hlangana nempilo yakho, ukuthi akulindeleki, uthi ungabacasuli njengabangeneleli. Uthini lapha? Yebo, ngizochaza lokhu ngokuningiliziwe. Kepha nayi into yesine iBhayibheli elikushoyo ngezinkinga. Izinkinga zinenhloso. Izinkinga zinenhloso. UNkulunkulu unenhloso kukho konke. Ngisho nezinto ezimbi ezenzeka empilweni yethu, UNkulunkulu angakhipha okuhle kubo. Akumele uNkulunkulu adale zonke izinkinga. Iningi lezinkinga esizibangela zona. Abantu bathi, kungani abantu begula? Isizathu sokuqala ukuthi asikwenzi lokho uNkulunkulu athi masikwenze. Uma sidle lokho uNkulunkulu athi masikudle, uma silele njengoba uNkulunkulu ethi masiphumule, uma sisebenza njengoba uNkulunkulu asitshela ukuthi sisebenze, ukube besingavumeli imizwa engemihle ezimpilweni zethu njengoba kusho uNkulunkulu, uma silalela uNkulunkulu, ngeke sibe nezinkinga zethu eziningi. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi cishe i-80% yezinkinga zempilo kulelizwe, eMelika, kubangelwa yilokho okubizwa ngokuthi ukukhetha okungapheli kwendlela yokuphila. Ngamanye amagama, asikwenzi into efanele. Asenzi into enempilo. Imvamisa senza into ezenzakalisayo. Kepha akushoyo lapha, izinkinga zinenhloso. Uthi lapho uhlangabezana nezinkinga, qaphela ukuthi beza ukuzokhiqiza. Kokelezela lelo binzana, bazokhiqiza. Izinkinga zingakhiqiza. Manje, azakhiqizi ngokuzenzakalelayo. Leli gciwane le-COVID, uma ngingaphenduli ngosuku olulungile, ngeke ikhiqize noma yini enhle empilweni yami. Kepha uma ngiphendula ngendlela efanele, ngisho nezinto ezingezinhle kakhulu empilweni yami kungakhiqiza ukukhula futhi kusizakale nesibusiso, empilweni yakho nasempilweni yami. Beza ukuzokhiqiza. Usho lapha ukuthi ukuhlupheka nengcindezi nosizi, yebo, ngisho nokugula kungafeza okuthile zenani uma sikuvumela. Konke kukhetho lwethu, konke kusimo sethu sengqondo. UNkulunkulu usebenzisa ubunzima ezimpilweni zethu. Uthi, kuhle, ukukwenza kanjani lokho? UNkulunkulu ubusebenzisa kanjani ubunzima nezinkinga empilweni yethu? Yebo, ngiyabonga ngokubuza, ngoba isigaba esilandelayo noma ingxenye elandelayo yamavesi ithi ukuthi uNkulunkulu uzisebenzisa ngezindlela ezintathu. Izindlela ezintathu, uNkulunkulu usebenzisa izinkinga empilweni yakho izindlela ezintathu. Okokuqala, izinkinga zivivinya ukholo lwami. Manje, ukholo lwakho lufana nomsipha. Umsipha awukwazi ukuqiniswa ngaphandle kokuthi uhlolwe, ngaphandle kokuthi weluliwe, ngaphandle kokuthi ifakwe ngaphansi kwengcindezi. Awukhulisi izicubu eziqinile ngokungenzi lutho. Uhlakulela izicubu eziqinile ngokuzelula futhi sibaqinise futhi sibavivinye nokuzicindezela kuze kube semkhawulweni. Ngakho-ke uthi kunezinkinga eza ukuvivinya ukholo lwami. Uthi qaphela ukuthi beza ukuzohlola ukholo lwakho. Manje, lelo gama lokuvivinya khona lapho, lelo yigama ezikhathini zebhayibheli elalisetshenziselwa ukucwilisa izinsimbi. Futhi into obungayenza ukuthi uthathe insimbi eyigugu njengesiliva noma igolide noma enye into, ubuyifaka ebhodweni elikhulu, ubelishisa emazingeni okushisa aphezulu kakhulu, ngani? Emazingeni okushisa aphezulu, konke ukungcola sekushisiwe. Futhi into kuphela esele igolide elimsulwa noma isiliva elihlanzekile. Ligama lesiGrikhi lapha lokuhlola. Ungumlilo wokucwilisa lapho uNkulunkulu ebeka ukushisa futhi ikuvumela lokho ezimpilweni zethu, kushisa izinto ezingabalulekile. Uyazi ukuthi kuzokwenzekani emasontweni ambalwa ezayo? Izinto ezithi sonke besicabanga ukuthi zibalulekile, sizobona, hmm, ngihlangane kulungile ngaphandle kwalokho. Sizohlela kabusha izinto eziza kuqala kithi, ngoba izinto zizoshintsha. Manje, isibonelo zakudala sokuthi izinkinga zivivinya kanjani ukholo lwakho yizindaba ezikhuluma ngoJobe ezisebhayibhelini. Kukhona incwadi ephelele ephathelene noJobe. Uyazi, uJobe wayengumuntu ocebile kunabo bonke eBhayibhelini, kwathi ngosuku olulodwa, walahlekelwa yikho konke. Walahlekelwa ngumndeni wakhe wonke, waphulukana nayo yonke ingcebo yakhe, ulahlekelwe bonke abangane bakhe, abashokobezi bahlasela umndeni wakhe, waba nesifo esingalapheki, esibuhlungu kakhulu lokho akunakwelashwa. Kulungile, ukuphela kwakhe. Futhi nokho uNkulunkulu wayevivinya ukholo lwayo. Futhi kamuva uNkulunkulu umbuyisela empeleni lokho ayenakho ngaphambi kokudlula esivivinyweni esikhulu. Ngesinye isikhathi ngifunde isicaphuna ndawo ndawo kudala wathi abantu banjengezikhwama zewathi. Awazi ngempela ukuthi yini eku-em uze uphonsa 'emanzini ashisayo. Futhi-ke ungabona okungaphakathi kubo. Wake waba nolunye lwalezozinsuku zamanzi ashisayo? Wake waba nelilodwa lalawo masonto noma izinyanga ezishisayo zamanzi? Sisesimweni samanzi ashisayo njengamanje. Futhi okusazophuma kuwe yikho okungaphakathi kuwe. Kufana nokuxubha kwamazinyo. Uma ngineshubhu lokuxubha izinyo futhi ngiyicindezela, yini ezophuma? Uthi, kuhle, izinyo lamazinyo. Cha, hhayi ngempela. Kungasho amazinyo ngaphandle, kepha yayingaba nesoso se-marinara noma ibhotela lamantongomane noma imayonnaise ngaphakathi. Yini ezophuma uma ifakwa ngaphansi kwengcindezi noma yini ekuyo. Futhi ezinsukwini ezizayo njengoba usebenza ne-COVID virus, okuzovela kuwe yilokho okungaphakathi kuwe. Futhi uma ugcwala ulaka, lokho kuzophuma. Futhi uma ugcwele ukukhungatheka, lokho kuzophuma. Futhi uma ugcwele intukuthelo noma ukukhathazeka noma umuzwa wecala noma amahloni noma ukungavikeleki, lokho kuzovela. Uma ugcwala ukwesaba lokho, noma yini ingaphakathi kuwe yini ezophuma lapho ingcindezi ifakwa kuwe. Futhi yilokho akushoyo lapha, ukuthi izinkinga zivivinya ukholo lwami. Uyazi, eminyakeni edlule, ngahlangana nendoda endala impela engqungqutheleni eminyakeni eminingi edlule emuva eMpumalanga. Ngicabanga ukuthi kwakunguTennessee. Futhi yena, le ndoda endala yangitshela ukuthi kuhlukaniswa kanjani kwaba inzuzo enkulu kunazo zonke empilweni yakhe. Futhi ngathi, “Kulungile, ngifuna ukuzwa le ndaba. "Ngitshele konke ngakho." Futhi ukuthi kwakuyini ayesebenzile ekubumbeni izinkuni impilo yakhe yonke. Wayekade engumboni impilo yakhe yonke. Kepha ngolunye usuku ngesikhathi sokuwohloka komnotho, umphathi wakhe ungene ngaphakathi maqede wamemezela, "Uxoshiwe." Futhi bonke ubuchwepheshe bakhe baphuma ngomnyango. Futhi wayekhulelwe eneminyaka engama-40 enomfazi nomndeni futhi alikho elinye ithuba lomsebenzi eduze kwakhe, futhi kwaba nokuwohloka komnotho okwenzeka ngaleso sikhathi. Futhi wayedangele, futhi wayesaba. Abanye kini bangazizwa ngaleyo ndlela njengamanje. Kungenzeka ukuthi usuvele ulahliwe. Mhlawumbe wesaba ukuthi uzoba njalo elele phakathi nale nkinga. Futhi wayecindezeleke kakhulu, wayenovalo. Uthe, ngibhale lokhu phansi, wathi, “Ngizwe sengathi "umhlaba wami wawa ngosuku engixoshwe ngalo. "Kepha ngithe uma ngibuyela ekhaya, ngatshela umkami ngokwenzekile, "wabuza, 'Manje uzokwenzenjani?' "Futhi ngathi, kahle-ke selokhu ngaxoshwa, "Ngizovele ngenze engangifuna ukukwenza." "Yiba ngumakhi. "Ngizobolekwa imali ekhaya "futhi ngizongena ebhizinisini lokwakha." Futhi wangitshela, “Uyazi, Rick, umsebenzi wami wokuqala "bekungokwakhiwa kwezimoto ezimbili ezincane." Yilokho akwenza. Kepha wathi, "Ingakapheli iminyaka emihlanu, bengingumbhali wezigidi eziningi." Igama laleyo ndoda, indoda ebengikhuluma nayo, kwakunguWallace Johnson, nebhizinisi awaqala ngalo ngemuva kokuxoshwa wabizwa ngokuthi yiHoliday Inns. Amaholide Eholide. UWallace ungitshele ukuthi, "URick, namuhla, uma ngingathola "umuntu ongixoshile, bengingathanda ngobuqotho "ngiyabonga ngokwenzile." Ngaleso sikhathi lapho kwenzeka, ngangingaqondi kungani ngaxoshwa, kungani ngachithwa. Kepha kamuva ngabona ukuthi kwakuwukungeniswa kukaNkulunkulu futhi necebo elihle lokungingenisa emsebenzini wokukhethwa kwakhe. Izinkinga zinenhloso. Banenhloso. Yazi ukuthi bazokhiqiza, futhi enye yezinto zokuqala bakhiqiza ukholo olukhulu, bavivinya ukholo lwakho. Inombolo yesibili, nansi inzuzo yesibili yezinkinga. Izinkinga zithuthukisa ukukhuthazela kwami. Bakhulisa ukukhuthazela kwami. Leyo ngxenye elandelayo yesisho, ithi lezi zinkinga ziza ukuthuthukisa ukukhuthazela. Bakhulisa ukukhuthazela empilweni yakho. Yini imiphumela yezinkinga empilweni yakho? Ukuhlala amandla. Kungokoqobo amandla okubhekana nengcindezi. Namuhla sikubiza ngokuthi ukuqina. Amandla okugoqa emuva. Futhi esinye sezimfanelo ezinkulu kunazo zonke ingane okudingeka zifunde futhi wonke umuntu omdala kudingeka afunde ukukhuthala. Ngoba wonke umuntu uyawa, wonke umuntu uyakhubeka, wonke umuntu ubhekana nezikhathi ezinzima, wonke umuntu uyagula ngezikhathi ezihlukile. Wonke umuntu unokwehluleka empilweni yabo. Uyisingatha kanjani ingcindezi. Ukukhuthazela, uyaqhubeka nokuqhubeka nokunamathela. Hhayi-ke, ufunda kanjani ukwenza lokho? Ufunda kanjani ukubhekana nengcindezi? Ngokuhlangenwe nakho, leyo ukuphela kwendlela. Awufundi ukuphatha ingcindezi encwadini. Awufundi ukuthi ungamelana kanjani nengcindezi kumhlangano. Ufunda ukubhekana nengcindezi ngokuba ngaphansi kwengcindezi. Futhi awazi ukuthi yini okukuwe kuze kube yilapho ubekwe kuleso simo. Ngonyaka wesibili weSaddleback Church, 1981, Ngadlula enkathini yokudangala lapho maviki onke bengifuna ukuhoxa. Futhi ngangifuna ukuyeka njalo ngeSonto ntambama. Kodwa-ke, bengibhekene nobunzima empilweni yami, kodwa nokho ngangibeka unyawo olulodwa phambi kolunye njengoNkulunkulu, ungangitholi ngakhe ibandla elikhulu, kepha uNkulunkulu, ngithole kuleli sonto. Futhi angizange ngidikibale. Ngijabule kakhulu ukuthi angiyekanga. Kepha ngijabule kakhulu ukuthi uNkulunkulu akazange angilahle ithemba. Ngoba lokho kwakuyivivinyo. Futhi ngalowo nyaka wokuqulwa kwecala, ngakhula ngokomoya namandla obuhlobo nangokomzwelo nangokwengqondo lokho kwangivumela eminyakeni eminingi kamuva ukujikisa zonke izinhlobo zamabhola futhi ubhekane nezingcindezi ezinkulu zokucindezelwa emehlweni omphakathi ngoba ngadlula kulowo nyaka sobunzima obucashile, omunye emva komunye. Uyazi, iMelika ibilithandana kalula. Sithanda ukusebenziseka lula. Ezinsukwini nasemavikini azayo kule nkinga, kuzoba nezinto eziningi eziphazamisayo. Okungalungile. Futhi yini esizoyenza nathi lapho konke kungahambi kahle, lapho kufanele uqhubeke nje ukuqhubeka lapho ungazizwa ufuna ukuqhubeka. Uyazi, inhloso kanxantathu noma inhloso yomashi empeleni akuphathelene nesivinini, ukuthi ufika ngokushesha kangakanani lapho, kumayelana nokukhuthazela. Ngabe uyawuqeda umncintiswano? Uzilungiselela kanjani lezo zinhlobo zezinto? Ngokudlula kubo. Ngakho-ke lapho welule ezinsukwini ezizayo, ungakhathazeki ngakho, ungakhathazeki ngakho. Izinkinga zithuthukisa ukukhuthazela kwami. Izinkinga zinenhloso, zinenhloso. Into yesithathu uJames asitshela yona ngezinkinga esidlula kukho ukuthi izinkinga zivuthisa isimilo sami. Futhi ukusho lokhu evesini lesine sikaJakobe isahluko sokuqala. Uthi kodwa, vumela inqubo iqhubeke uze ube ngabantu abanobuntu obuvuthiwe nobuqotho obungenazindawo ezibuthakathaka. Ubungeke uthande ukuba nakho lokho? Ubungeke uthande ukuzwa abantu bethi, uyazi, ukuthi lowesifazane akanazindawo ezibuthakathaka esimweni sakhe. Leya ndoda, leyo ndoda ayinazindawo ezibuthakathaka isimilo sayo. Ngabe uluthola kanjani lolo hlobo lomlingiswa ovuthiwe? Vumela inqubo iqhubeke uze ube ngabantu, abesilisa nabesifazane, abanezinhlamvu ezivuthiwe nobuqotho obungenazindawo ezibuthakathaka. Uyazi, bekukhona ucwaningo oludumile olwenziwe abaningi, eminyakeni eminingi edlule eRussia engikukhumbulayo ukubhala phansi, futhi kwakusemphumela wokuthi izimo zokuphila ezahlukahlukene kanjani kuthinte isikhathi eside noma isikhathi sokuphila kwezilwane ezahlukene. Futhi-ke babeka ezinye izilwane zibe lula, futhi bafaka ezinye izilwane kwezinye ubunzima nezimo ezinesihluku. Futhi ososayensi bathola ukuthi izilwane ezazibekwe ezintofontofo nezimo ezilula, izimo, lezo zimo zokuphila, empeleni zaba buthaka. Ngenxa yokuthi izimo zazilula kakhulu, baba buthaka futhi usengozini yokugula. Futhi labo ababesesimweni esikahle bafa kungekudala kunalabo abavunyelwe ukuzwa ubunzima obujwayelekile bempilo. Akujabulisi lokho? Yini eyiqiniso ngezilwane engiqinisekile ukuthi iyiqiniso wesimilo sethu, futhi. Nakwisiko laseNtshonalanga ikakhulukazi emhlabeni wanamuhla, sikuthole kulula ngezindlela eziningi. Ukuphila izimpilo lula. Injongo kaNkulunkulu yokuqala empilweni yakho ukukwenza ube njengoJesu Kristu ngesimo. Ukucabanga njengoKristu, ukwenza njengoKristu, ukuphila njengoKristu, ukuthanda njengoKristu, ukuba nethemba njengoKristu. Futhi uma lokho kuyiqiniso, futhi ibhayibheli likusho lokhu kaninginingi, khona-ke uNkulunkulu uzokuhambisa ezintweni ezifanayo uJesu adlula kukho ukukhulisa isimilo sakho. Uthi, kuhle, unjani uJesu? UJesu uluthando nenjabulo nokuthula nokubekezela nomusa, isithelo sikaMoya, zonke lezo zinto. Futhi uNkulunkulu uzikhiqiza kanjani lezo? Ngokusibeka esimweni esiphambene. Sifunda ukubekezela lapho silingwa ukuba siphelelwe isineke. Sifunda uthando lapho sibekwa phambi kwabantu abangenaluthando. Sifunda injabulo phakathi kosizi. Sifunda ukulinda futhi sibe nalolo hlobo lokubekezela lapho kufanele silinde. Sifunda umusa lapho silingwa ukuba sibe nobugovu. Ezinsukwini ezizayo, kuzoba isilingo kakhulu ukuvele uzingeke engxenyeni engaphansi, ukudonsa futhi, futhi ngathi, sizosinakekela. Mina, uqobo, nami, umndeni wami, thina sobane futhi akusekho bese ukhohlwa ngabo bonke abanye abantu. Kepha lokho kuzonciphisa umphefumulo wakho. Uma uzoqala ukucabanga abanye abantu nokusiza labo ababuthakathaka, asebekhulile nalabo abanezimiso zepreexisting, futhi uma uzofinyelela, umphefumulo wakho uyokhula, inhliziyo yakho izokhula, uzoba ngumuntu ongcono ekugcineni kwale nkinga ukwedlula indlela owawunayo ekuqaleni, kulungile? Uyabona, uNkulunkulu, lapho efuna ukwakha isimilo sakho, angasebenzisa izinto ezimbili. Angasebenzisa iZwi lakhe, iqiniso liyasiguqula, futhi angasebenzisa izimo, okunzima kakhulu. Manje, uNkulunkulu angathanda ukusebenzisa indlela yokuqala, iZwi. Kepha asihlali sililalela iZwi, ngakho usebenzisa izimo ukuze sinake. Futhi kunzima kakhulu, kepha kuvame ukusebenza kakhudlwana. Manje, uthi, kulungile, kulungile, Rick, ngiyakuthola, ukuthi izinkinga ziyahlukahluka futhi zinenhloso, futhi balapha ukuvivinya ukholo lwami, futhi bazoba zonke izinhlobo ezahlukene, futhi azifiki lapho ngifuna 'em. Futhi uNkulunkulu angasebenzisa 'em ukukhulisa isimilo sami nokuvulela impilo yami. Manje yini okufanele ngiyenze? Ezinsukwini ezimbalwa ezizayo nasemavikini mhlawumbe ezinyangeni ezizayo njengoba sibhekene nale nkinga ye-coronavirus sindawonye, kufanele ngiphendule kanjani ezinkingeni empilweni yami? Futhi angikhulumi nje ngegciwane. Ngikhuluma ngezinkinga ezizofika njengomphumela yokungasebenzi noma izingane zisekhaya noma zonke ezinye izinto eziphazamisa impilo njengoba bekulokhu kwenzeka. Kufanele ngiphendule kanjani ezinkingeni zempilo yami? Yebo, futhi, uJames ucacile. futhi usinika izinto ezintathu ezisebenzayo, izimpendulo ezinkulu, kepha yizimpendulo ezilungile. Eqinisweni, lapho ngikutshela okokuqala, uzohamba, kufanele ungidlale. Kepha kunezimpendulo ezintathu, zonke ziqala ngo-R. Impendulo yokuqala athi uma uku uhamba ngezikhathi ezinzima, thokozani. Uyahamba, uyadlala? Lokho kuzwakala kungafanele. Angisho ukuthokoza ngalenkinga. Ngilandele kulokhu umzuzu nje. Esho akubheke njengensolo yenjabulo. Phatha lezi zinkinga njengabangane. Manje, ungangiqondi. Akusho ukuthi kunamanga. Akasho ukuthi beka ukumamatheka kwepulasitiki, yenza sengathi konke kulungile futhi akulungile, ngoba akunjalo. Pollyanna, Little Orphan Annie, ilanga izophuma kusasa, ingahle iphume kusasa. Akasho ukuthi aphike okungokoqobo, angikho nakancane. Akasho ukuthi yi-isochist. Hawu mfana, ngidlula ebuhlungwini. UZimu ubuzonda ubuhlungu njengawe. O, ngiyahlupheka, ubani. Futhi unale nkinga yokufela ukholo, futhi uyazi, Ngiba nalo muzwa ongokomoya kuphela lapho ngizwa kabi. Cha, cha, cha, uNkulunkulu akafuni ukuba umfel 'ukholo. UNkulunkulu akafuni ukuthi ube nakho isimo sengqondo sokukhathazeka ngobuhlungu. Uyazi, ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ebengikudlula isikhathi esinzima impela futhi umngane wayezama ukuba nomusa bathi, "Uyazi, Rick, hloka "ngoba izinto zingaba zimbi kakhulu." Futhi qagela ukuthi, baba banjani. Lokho kwakungekho lusizo nhlobo. Bengijabule futhi baba bengixakile. (amazwibela) Ngakho-ke akuphathelene nokucabanga okuyiphutha kukaPollyanna. Uma ngenza umdlandla, ngizoba nomdlandla. Cha, cha, cha, cha, kuningi, kujule kakhulu kunalokho. Asithokozi, asilaleli, asijabuli ngenkinga. Siyajabula ngenkinga, ngenkathi sisenkingeni, kusenezinto eziningi okufanele zijabule ngazo. Hhayi inkinga uqobo lwayo, kodwa ezinye izinto ukuthi sithokoze ngazo ezinkingeni. Kungani sikwazi ukujabula ngisho nasenkingeni? Ngoba siyazi ukuthi kunenhloso ngakho. Ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu akasoze asishiya. Ngoba sazi izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyazi ukuthi uNkulunkulu unenjongo. Phawula uthi uyibheka njengensolo yenjabulo. Zungelezela igama elithi. Cabanga izindlela zokwenza umqondo wakho ngamabomu. Unokuguqulwa kwesimo ukuthi uzokwenza lapha. Kungumqondo wakho ukukhetha? KumaHubo 34 ivesi lokuqala, uthi Ngiyoyibonga iNkosi ngaso sonke isikhathi. Ngazo zonke izikhathi. Futhi uthi ngizokwenza. Kukhetho lwentando, isinqumo. Kuzinikela, ukukhetha. Manje, uzohamba kulezi zinyanga ezizayo nganoma yisiphi isimo esihle noma isimo esibi. Uma umbono wakho mubi, uzozenzela futhi bonke abanye abaseduze kwakho badabukisa. Kepha uma isimo sakho sengqondo sihle, ukukhetha kwakho ukujabula. Uthi, ake sibheke ohlangothini oluqhakazile. Asitholeni izinto esingambonga uNkulunkulu ngazo. Futhi masiqonde ukuthi noma kubi, UNkulunkulu angakhipha okuhle kokubi. Ngakho-ke yenza ukulungisa isimo. Ngeke ngibe munyu kule nkinga. Ngizoba ngcono kule nkinga. Ngizokhetha, kungukukhetha kwami ​​ukujabula. Kulungile, inombolo yesibili, i-R yesibili iyisicelo. Futhi lokho kucela uNkulunkulu ukuhlakanipha. Lokhu yilokho ofuna ukukwenza noma kunini lapho usenkingeni. Ufuna ukucela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. Isonto eledlule, uma ulalele umlayezo weviki eledlule, futhi uma uwuphuthele, buyela ku-inthanethi bese ubuka lowo mlayezo ukuyenza idlule esigodini segciwane ngaphandle kokwesaba. Kukhetho lwakho ukujabula, kodwa-ke ubuza uNkulunkulu ukuhlakanipha. Futhi ucela ukuhlakanipha kuNkulunkulu futhi uyakhuleka futhi uthandazela ngezinkinga zakho. Ivesi lesikhombisa lisho lokhu kuJakobe owodwa. Uma kule nqubo noma ngubani kini angazi ukuthi uhlangana kanjani noma iyiphi inkinga ethile, lokhu kuphume ekuhunyushweni kwePhillips. Uma kwinqubo noma ngubani kini angazi ukuthi uhlangana kanjani noma iyiphi inkinga ethile kuphela onayo kufanele ubuze uNkulunkulu opha bonke ngesandla esivulekile ngaphandle kokubenza bazizwe benecala. Futhi ungaqiniseka ukuthi ukuhlakanipha okudingekayo uzokunikwa. Bathi kungani kuzo zonke izinto bengizocela ukuhlakanipha phakathi kwenkinga? Ngakho-ke ufunda kuyo. Ngakho-ke ungafunda enkingeni, yingakho ucela ukuhlakanipha. Kuyasiza kakhulu uma uzoyeka ukubuza ukuthi kungani, kungani lokhu kwenzeka, bese uqala ukubuza ukuthi, ufuna ngifundeni? Ufuna ngibe yiphi? Ngingakhula kanjani kulokhu? Ngingaba kanjani ngowesifazane ongcono? Ngingaba kanjani indoda engcono kule nkinga? Yebo, ngiyahlolwa. Angikhathazeki ngokuthi kungani. Kungani ngisho kungenandaba. Okubalulekile ukuthi yini, ngizoba yini, futhi yini engizoyifunda kulesi simo? Futhi ukuze wenze lokho, kufanele ubuze ukuhlakanipha. Ngakho-ke uthi noma nini lapho udinga ukuhlakanipha, cela uNkulunkulu nje, UNkulunkulu uzokupha. Ngakho-ke uthi, Nkulunkulu, ngidinga ukuhlakanipha njengomama. Izingane zami zizoba sekhaya ngenyanga ezayo. Ngidinga ukuhlakanipha njengobaba. Ngihola kanjani lapho imisebenzi yethu isengozini futhi angikwazi ukusebenza njengamanje? Cela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. Musa ukubuza ukuthi kungani, kodwa ubuze ukuthi yini. Ngakho-ke okokuqala ujabule, uthola isimo sengqondo esihle yokuthi ngizobonga uNkulunkulu hhayi inkinga, kodwa ngizokubonga uNkulunkulu enkingeni. Ngoba okuhle kukaNkulunkulu ngisho nalapho impilo imunca. Kungakho ngibiza lolu chungechunge "Ukholo lwangempela olusebenza lapho impilo ingasebenzi." Lapho impilo ingasebenzi. Ngakho-ke ngiyathokoza futhi ngiyacela. Into yesithathu uJames athi ayenze ukuphumula. Yebo, vele ushaye nje, ungazitholi konke kugcwele inqwaba yezinzwa. Musa ukucindezelwa kakhulu ukuthi awukwazi ukwenza lutho. Ungakhathazeki ngekusasa. Unkulunkulu uthi ngizokunakekela, ngethembe. Uthemba uNkulunkulu ukuthi wazi okungcono kakhulu. Usebenzisana naye. Awusifinqanisi isimo obhekene naso. Kepha uthi nje, Nkulunkulu, ngiphumula. Angingabazi. Angingabazi. Ngizokuthemba kulesi simo. Ivesi lesishiyagalombili ivesi lokugcina esizolibuka. Yebo, sizobheka eyodwa ngomzuzu. Kepha ivesi lesishiyagalombili lithi, kepha kufanele ucele ngokholo lwangempela ngaphandle kokungabaza okuyimfihlo. Yini oyicelayo ekukholweni okuqotho? Cela ukuhlakanipha. Bese uthi, Nkulunkulu, ngidinga ukuhlakanipha, futhi ngiyabonga uzonginika ukuhlakanipha. Ngiyabonga, unginika ukuhlakanipha. Ungakhathazeki, ungangabazi, kepha yikhiphe kuNkulunkulu. Uyazi, kusho iBhayibheli, ngaphambili lapho ngiveza ukuthi washo lezi zinhlobo eziningi zezinkinga. Uyazi, sikhuluma ngamagama ahlukahlukene, eziningi, izinhlobo eziningi zezinkinga. Leli gama ngesiGreek, izinhlobo eziningi zenkinga, yigama elifanayo elimbozwe kuPeter wokuQala Isahluko sesine, ivesi lesine elathi UNkulunkulu unezinhlobo eziningi zomusa ongakunika zona. Izinhlobo eziningi zomusa kaNkulunkulu. Kuyinto efanayo enemikhakha eminingi, ehlukahlukene, njengedayimane. Uthini lapho? Kuzo zonke izinkinga onazo, kunomusa ovela kuNkulunkulu otholakalayo. Kuzo zonke izinhlobo eziningi zokulingwa nosizi nobunzima, kukhona uhlobo lomusa nesihe namandla uNkulunkulu afuna ukukunikeza ukufanisa leyo nkinga ethile. Udinga umusa ngalokhu, udinga umusa ngalokhu, udinga umusa ngalokhu. UNkulunkulu uthi umusa wami unjengezinto eziningi njengezinkinga obhekene nazo. Manje ngithini? Ngithi zonke izinkinga ezikhona empilweni yakho, kufaka phakathi le nkinga ye-COVID, usathane kusho ukukuhlula ngalezi zinkinga. Kepha uNkulunkulu kusho ukuthi uzokuthuthukisa kulezi zinkinga. Ufuna ukukuhlula, Sathane, kepha uNkulunkulu ufuna ukuthuthukisa wena. Manje, izinkinga eziza empilweni yakho akwenzi ngokuzenzakalelayo ube umuntu ongcono. Abantu abaningi baba ngabantu abababayo abavela ku-em. Akukwenzi ngokuzenzekelayo ube ngumuntu ongcono. Yisimo sakho sengqondo esenza umehluko. Futhi yilapho engifuna ukukunikeza enye into okufanele uyikhumbule. Inombolo yesine, into yesine okufanele uyikhumbule lapho ubhekene nezinkinga ukukhumbula izithembiso zikaNkulunkulu. Khumbula izethembiso zikaNkulunkulu. Lokho kuphansi evesini 12. Ake ngikufundele lesi sithembiso. UJakobe isahluko sokuqala, ivesi 12. Ubusisiwe umuntu obekezelela ngaphansi kwecala, ngoba lapho esesivivile, uzokwamukela umqhele wokuphila uNkulunkulu awuthembisile, kukhona izwi, kulabo abamthandayo. Ake ngifunde futhi. Ngifuna ulalele kakhulu. Ubusisiwe umuntu obekezelela ngaphansi kwecala, obhekana nobunzima, njengesimo esikuso njengamanje. Ubusisiwe umuntu okhuthazayo, obekezelayo, othembela uNkulunkulu, oqhubeka ekholwa ngaphansi kovivinyo, ngoba lapho esemi isivivinyo, siphuma ngasemuva, lesi sivivinyo asihlali ekugcineni. Kukhona ukuphela kwayo. Uzophuma komunye umkhawulo womhubhe. Uzothola umqhele wokuphila. Angazi nokuthi kusho ukuthini lokho, kodwa kuhle. Umqhele wokuphila uNkulunkulu awuthembisile kulabo abamthandayo. Kukhetho lwakho ukujabula. Kukhetho lwakho ukwethemba ukuhlakanipha kukaNkulunkulu esikhundleni sokungabaza. Cela uNkulunkulu akuphe ukuhlakanipha ukuze akusize kulesimo sakho. Bese ucela uNkulunkulu ukuthi ukholo lukhuthazele. Bese uthi, Nkulunkulu, angizukunikezela. Lokhu kuzodlula. Omunye wake wabuzwa, yini okuthandayo ivesi leBhayibheli? Yathi, kwenzeka. Futhi kungani ulithanda lelo vesi? Ngoba uma kufika izinkinga, ngiyazi ukuthi azizelanga ukuzohlala. Zenzeka. (amazwibela) Futhi kuyiqiniso kulesi simo esithile. Akuzi ukuhlala, kuzokwenzeka. Manje, ngifuna ukusondela lo mqondo. Inkinga ayigcini nje ukudala izinkinga. Ihlala izembulela, ihlala izembulela. Le nkinga ingaveza eminye imifantu emshadweni wakho. Le nkinga ingaveza eminye imifantu ebuhlotsheni bakho noNkulunkulu. Le nkinga ingaveza imifantu ethile kwindlela yakho yokuphila, ukuthi indlela uzicindezela ngayo kanzima. Futhi-ke zimisele ukuvumela uNkulunkulu ukuba akhulume nawe mayelana nezidingo okudingeka zishintshe empilweni yakho, kulungile? Ngifuna ucabange ngalokhu kuleli sonto, futhi ake ngininikeze izinyathelo ezisebenzayo, kulungile? Izinyathelo ezisebenzayo, inombolo yokuqala, ngifuna wena ukukhuthaza omunye umuntu ukuthi alalele lo mlayezo. Uzokukwenza lokho? Ngabe uzosidlulisela lesi sixhumanisi bese usithumela kumngani? Uma lokhu kukukhuthaze, kudlulise, futhi ube yisikhuthazo kuleli sonto. Wonke umuntu osondele kuwe udinga isikhuthazo ngesikhathi sale nkinga. Ngakho-ke thumela isixhumanisi. Emasontweni amabili edlule lapho sinesonto kumakhampasi ethu, e-Lake Forest nawo wonke amanye amakhampasi eSaddleback, babalelwa ku-30,000 abantu esontweni. Kepha kuleli sonto eledlule lapho kwadingeka sikhansele izinsizakalo futhi sonke kufanele sibuke ku-inthanethi, ngathi, wonke umuntu uya eqenjini lakho elincane futhi ameme omakhelwane bakho futhi umeme abangani bakho eqenjini lakho elincane, sathola abangu-181,000 Ama-ISPs amakhaya ethu axhunyiwe kwinkonzo. Lokho kusho ukuthi mhlawumbe isigamu sesigidi sabantu ubuke umyalezo wesonto eledlule. Isigamu sabantu noma ngaphezulu. Ngani, ngoba utshele omunye umuntu ukuthi azibukele. Futhi ngifuna ukukukhuthaza ukuba ube ngufakazi wezindaba ezinhle kuleli sonto ezweni elidinga izindaba ezinhle. Abantu badinga ukuzwa lokhu. Thumela isixhumanisi. Ngikholwa ukuthi singakhuthaza abantu abayisigidi kuleli sonto uma sonke singadlulisa umyalezo, kulungile? Inombolo yesibili, uma useqenjini elincane, asijahi ukwazi ukuhlangana, okungenani le nyanga, lokho nakanjani. Futhi ngakho-ke ngingakukhuthaza ukuthi usethe umhlangano obonakalayo. Ungaba neqembu eliku-inthanethi. Ukwenza kanjani lokho? Yebo, kukhona imikhiqizo laphaya efana ne-Zoom. Ufuna ukubheka ukuthi, Sondeza, kumahhala. Futhi ungangena lapho utshele wonke umuntu ukuthi enze i-Zoom ocingweni noma ekhompyutheni yabo, futhi ungaxhuma abantu abayisithupha noma abayisishiyagalombili noma abayi-10, futhi ungaba neqembu lakho kuleli sonto ku-Zoom. Futhi niyakwazi ukubonana, njenge-Facebook Live, noma kufana nabanye, niyazi, yini eku-iPhone uma ubheka i-FaceTime. Hhayi, awukwazi ukukwenza lokho ngeqembu elikhulu, kepha ungakwenza nomuntu oyedwa. Futhi ngakho-ke khuthazana ubuso nobuso ngobuchwepheshe. Manje sinobuchwepheshe obabungatholakali. Ngakho-ke hlola ukusondeza kweqembu elincane le-virtual group. Futhi empeleni lapha ku-inthanethi ungathola neminye imininingwane. Inombolo yesithathu, uma ungekho eqenjini elincane, Ngizokusiza ungene eqenjini eliku-inthanethi kuleli sonto, ngizo. Konke okudingeka ukwenze ukuthumela i-imeyili, PastorRick@saddleback.com. PastorRick @ saddleback, igama elilodwa, SADDLEBACK, saddleback.com, futhi ngizokuxhumanisa eqenjini eliku-inthanethi, kulungile? Ngemuva kwalokho qiniseka ukuthi uyingxenye yeSonto leSaddleback ukufunda incwadi yakho yansuku zonke engiyithumelayo nsuku zonke phakathi nale nhlekelele. Ibizwa nge- "Saddleback Ekhaya." Inezeluleko, inemiyalezo ekhuthazayo, kunezindaba ongazisebenzisa. Into engokoqobo. Sifuna ukuxhumana nawe nsuku zonke. Thola "iSaddleback Ekhaya." Uma ngingenalo ikheli lakho le-imeyili, khona-ke awuyitholi. Futhi ungangithumela i-imeyili ikheli lakho le-imeyili ku-PrinceRick@saddleback.com, futhi ngizokubeka ohlwini, futhi uzothola ukuxhumana kwansuku zonke, iphephandaba lansuku zonke elithi "Saddleback Ekhaya". Ngivele ngifune ukusondela ngaphambi kokuba ngithandaze ngokusho futhi ukuthi ngikuthanda kangakanani. Bengikukhuleka nsuku zonke, futhi ngizoqhubeka ngikuthandazele. Sizodlula kulokhu ndawonye. Lesi akusona ukuphela kwendaba. UNkulunkulu usesesihlalweni sakhe sobukhosi, futhi uNkulunkulu uzokusebenzisa lokhu ukukhulisa ukholo lwakho, ukuletha abantu ekukholweni. Futhi ngubani owaziyo ukuthi kwenzekani. Singathola imvuselelo ngokomoya kukho konke lokhu ngoba abantu bavame ukuguqukela kuNkulunkulu lapho bedlula ezikhathini ezinzima. Ake ngikuthandazele. Baba ngifuna ukunibonga ngawo wonke umuntu ubani olalele njengamanje. Kwangathi singawuphila umyalezo kaJakobe isahluko sokuqala, amavesi okuqala ayisithupha noma ayisikhombisa. Kwangathi sifunde ukuthi izinkinga ziyeza, zizokwenzeka, ziyahlukahluka, zinenhloso, nokuthi uzohamba sizisebenzisele okuhle ezimpilweni zethu uma singakwethemba. Sisize singangabazi. Sisize sijabule, sicele, futhi ukhumbule izithembiso zakho. Futhi ngithandazela wonke umuntu ukuthi babe nesonto elinempilo. Ngegama likaJesu, amen. Unkulunkulu anibusise, nonke. Dlulisa lokhu komunye umuntu.
&quot;Ukholo Olusingatha Ubunzima&quot; noMfundisi uRick Warren
< start="1.34" dur="1.42"> - Sawubona, wonke umuntu, nginguRick Warren, >
< start="2.76" dur="1.6"> Umfundisi eSaddleback Church nombhali >
< start="4.36" dur="2.58"> kwe- "Inhloso Eqhutshwe Impilo" nesipika >
< start="6.94" dur="2.71"> kuhlelo lwe- "Daily Hope". >
< start="9.65" dur="2.53"> Siyabonga ngokungena kulo msakazo. >
< start="12.18" dur="3.59"> Uyazi, kuleli sonto lapha e-Orange County, California, >
< start="15.77" dur="2.47"> uhulumeni wamemezela ukuthi bebevinjela >
< start="18.24" dur="4.19"> yonke imihlangano yanoma uluphi uhlobo >
< start="22.43" dur="1.46"> kuze kube sekupheleni kwenyanga. >
< start="23.89" dur="2.81"> Uyemukelwa eSontweni leSaddleback ekhaya. >
< start="26.7" dur="1.41"> Ngijabule ukuthi ulapha. >
< start="28.11" dur="5"> Futhi ngizobe ngifundisa ngevidiyo >
< start="33.31" dur="4.59"> phakathi kwamanje noma nini lapho le nkinga ye-COVID-19 iphela. >
< start="37.9" dur="2.12"> Uyemukelwa eSontweni leSaddleback ekhaya. >
< start="40.02" dur="3.34"> Futhi ngifuna ukuthi ungilandele masonto onke, >
< start="43.36" dur="2.25"> ube yingxenye yalezi zinkonzo zokukhonza ndawonye. >
< start="45.61" dur="2.91"> Sizoba nomculo futhi sikhonze ndawonye, >
< start="48.52" dur="2.44"> futhi ngizobe ngikhipha izwi elivela eZwini likaNkulunkulu. >
< start="50.96" dur="3.01"> Uyazi, njengoba bengicabanga ngalokhu, >
< start="53.97" dur="2.15"> ngendlela, okokuqala ngidinga ukukutshela. >
< start="56.12" dur="3.84"> Ngabona ukuthi bazovele basikhansele ukuhlangana. >
< start="59.96" dur="3.6"> Futhi ngakho kuleli sonto, ngibe nes studio seSaddleback >
< start="63.56" dur="1.32"> bathuthela egalaji lami. >
< start="64.88" dur="2.34"> Empeleni ngithepha lokhu egaraji lami. >
< start="67.22" dur="2.46"> Ithimba lami lobuchwepheshe >
< start="69.68" dur="1.979"> Ngenani nina bafana, nithi sawubona wonke umuntu. >
< start="73.76" dur="3.12"> Basizile ukuyihambisa lapha futhi bayisetha konke >
< start="76.88" dur="4.74"> ukuze sikwazi ukukhuluma nawe masonto onke. >
< start="81.62" dur="3.32"> Manje, njengoba bengicabanga ngalokho okufanele simboze >
< start="84.94" dur="3.22"> phakathi nale nkinga ye-COVID-19, >
< start="88.16" dur="2.98"> Ngokushesha ngacabanga ngencwadi kaJames. >
< start="91.14" dur="2.67"> Incwadi kaJakobe iyincwadi encane kakhulu >
< start="93.81" dur="2.15"> ngasekupheleni kweTestamente eNtsha. >
< start="95.96" dur="3.81"> Kepha kuyasebenza futhi kuyasiza kakhulu, >
< start="99.77" dur="5"> futhi le ncwadi ngiyibiza ngokuthi ukholo olusebenza lapho impilo ingasebenzi. >
< start="105.56" dur="3.67"> Futhi ngicabange ukuthi uma kukhona okudingeka manje, >
< start="109.23" dur="4.75"> Ngabe sidinga ukholo olusebenzayo lapho impilo ingasebenzi. >
< start="113.98" dur="2.86"> Ngoba ayisebenzi kahle njengamanje. >
< start="116.84" dur="2.75"> Futhi namhlanje, kuleli sonto, sizoqala >
< start="119.59" dur="3.25"> uhambo ndawonye oluzokukhuthaza >
< start="122.84" dur="1.03"> ngokusebenzisa le nkinga. >
< start="123.87" dur="3.22"> Futhi angifuni uphuthelwe noma imiphi yale milayezo. >
< start="127.09" dur="4.1"> Ngoba incwadi kaJakobe empeleni ihlanganisa eziyi-14 ezinkulu >
< start="131.19" dur="4.34"> amabhlogo wokwakha, izimpikiswano eziyishumi nane zokuphila, >
< start="135.53" dur="3.76"> Izindawo eziyi-14 yilowo nalowo kini >
< start="139.29" dur="1.91"> osubhekane nakho empilweni yakho, >
< start="141.2" dur="3.17"> futhi uzobhekana nakho ngokuzayo. >
< start="144.37" dur="3.52"> Isibonelo, esahlukweni sokuqala sikaJames, >
< start="147.89" dur="1.6"> ake nginike nje ukubukeza okuncane kwalencwadi. >
< start="149.49" dur="1.42"> Izahluko ezine kuphela. >
< start="150.91" dur="2.99"> Isahluko sokuqala, sikhuluma okokuqala ngobunzima. >
< start="153.9" dur="1.77"> Futhi sizokhuluma ngalokho namhlanje. >
< start="155.67" dur="4.13"> Iyini injongo kaNkulunkulu ngezinkinga zakho? >
< start="159.8" dur="1.6"> Bese kukhulunywa ngokukhetha. >
< start="161.4" dur="1.62"> Uyakha kanjani ingqondo yakho? >
< start="163.02" dur="2.085"> Wazi kanjani ukuthi kufanele uhlale, uzohamba nini? >
< start="165.105" dur="2.335"> Wazi kanjani okufanele ukwenze, uzenza kanjani izinqumo? >
< start="167.44" dur="2.41"> Bese kukhulunywa ngesilingo. >
< start="169.85" dur="3.29"> Futhi sizobheka ukuthi unqoba kanjani izilingo ezivamile >
< start="173.14" dur="3.24"> empilweni yakho ebonakala iqhubeka nokwenza ukuthi wehluleke. >
< start="176.38" dur="2.04"> Futhi-ke ikhuluma ngokuholwa. >
< start="178.42" dur="2.68"> Futhi ikhuluma ngokuthi singabusiswa kanjani ngebhayibheli. >
< start="181.1" dur="2.24"> Hhayi nje ukuyifunda, kepha ubusiswe yiyo. >
< start="183.34" dur="1.56"> Lokho konke kusahluko sokuqala. >
< start="184.9" dur="2.36"> Futhi sizobheka labo emavikini azayo. >
< start="187.26" dur="2.7"> Isahluko sesibili sikhuluma ngobudlelwano. >
< start="189.96" dur="3.06"> Sizobheka ukuthi ubaphatha kanjani abantu kahle. >
< start="193.02" dur="2.628"> Futhi nabantu kufanele bahlale ekhaya, >
< start="195.648" dur="4.242"> bonke emndenini ndawonye, ​​izingane, omama nobaba, >
< start="199.89" dur="2.32"> futhi abantu bazothola izinhlungu zomunye nomunye. >
< start="202.21" dur="2.74"> Lowo kuzoba ngumyalezo obalulekile ebudlelwaneni. >
< start="204.95" dur="1.39"> Bese kukhulunywa ngokholo. >
< start="206.34" dur="4.76"> Ngabe umethemba kanjani uNkulunkulu uma ungazizwa unjalo >
< start="211.1" dur="2.18"> futhi uma izinto zihamba ngendlela engafanele? >
< start="213.28" dur="1.64"> Lokho konke kusahluko sesibili. >
< start="214.92" dur="3.32"> Isahluko sesithathu, sizoxoxa ngezingxoxo. >
< start="218.24" dur="1.66"> Amandla engxoxo. >
< start="219.9" dur="2.12"> Futhi lokhu kungenye yezindima ezibaluleke kakhulu >
< start="222.02" dur="3.73"> Ebhayibhelini ukuthi uwuphatha kanjani umlomo wakho. >
< start="225.75" dur="2.25"> Lokho kubalulekile ukuthi ngabe sisenkingeni noma cha. >
< start="228" dur="2.27"> Bese kukhulunywa ngobungani. >
< start="230.27" dur="2.21"> Futhi isinikeza imininingwane engokoqobo >
< start="232.48" dur="2.71"> uzakhela kanjani ubungane obuhlakani >
< start="235.19" dur="2.7"> futhi uvikele ubungane obungenangqondo. >
< start="237.89" dur="2.24"> Lokho kusahluko sesithathu. >
< start="243.63" dur="2.39"> Futhi esahlukweni sesine, sikhuluma ngakho >
< start="246.02" dur="1.88"> uzigwema kanjani izimpikiswano >
< start="247.9" dur="1.56"> Futhi lokho kuzoba wusizo lwangempela. >
< start="249.46" dur="2.78"> Njengoba kukhuphuka ukungezwani nokukhungatheka, >
< start="252.24" dur="2.94"> njengoba abantu sebephelelwe ngumsebenzi, uzigwema kanjani izingxabano? >
< start="255.18" dur="2.03"> Futhi-ke ikhuluma ngokwahlulela abanye. >
< start="257.21" dur="2.74"> Ukuyeka kanjani ukudlala uNkulunkulu? >
< start="259.95" dur="1.84"> Lokho kungadala ukuthula okukhulu ezimpilweni zethu >
< start="261.79" dur="1.08"> uma besingakwenza lokho. >
< start="262.87" dur="1.67"> Futhi-ke ikhuluma ngekusasa. >
< start="264.54" dur="1.82"> Uhlela kanjani ikusasa? >
< start="266.36" dur="1.56"> Lokho konke kusahluko sesine. >
< start="267.92" dur="2.75"> Manje, esahlukweni sokugcina, isahluko sesihlanu, ngikutshelile >
< start="270.67" dur="0.98"> kwakukhona izahluko ezine, empeleni zikhona >
< start="271.65" dur="1.683"> izahluko ezinhlanu kuJakobe. >
< start="274.327" dur="2.243"> Sizoxoxa ngemali. >
< start="276.57" dur="3.65"> Futhi kukhuluma ngokuthi ungaba kanjani uhlakaniphile ngengcebo yakho. >
< start="280.22" dur="1.73"> Futhi-ke sizobheka ukubekezela. >
< start="281.95" dur="3.26"> Wenzani uma ulinda uNkulunkulu? >
< start="285.21" dur="1.92"> Igumbi elinzima kakhulu ukuhlala kulo >
< start="287.13" dur="3.87"> usegunjini lokulinda lapho usuphuthuma kanti cha akunjalo. >
< start="291" dur="1.29"> Futhi-ke sizobheka umkhuleko, >
< start="292.29" dur="2.07"> okuwumyalezo wokugcina esizowubheka. >
< start="294.36" dur="1.94"> Uthandaza kanjani ngezinkinga zakho? >
< start="296.3" dur="2.58"> Ibhayibheli lithi kunendlela yokuthandaza nokuthola izimpendulo, >
< start="298.88" dur="2.29"> futhi kunendlela yokungathandazi. >
< start="301.17" dur="1.27"> Futhi sizokubheka lokho. >
< start="302.44" dur="3.763"> Manje namhlanje, sizovele sibheke amavesi ayisithupha okuqala >
< start="306.203" dur="2.072"> yencwadi kaJakobe. >
< start="308.275" dur="5"> Uma ungenalo iBhayibheli, khona-ke ngifuna ulilande >
< start="313.46" dur="3.73"> ngaphandle kwale webhusayithi uhlaka, amanothi wokufundisa, >
< start="317.19" dur="2.02"> ngoba wonke amavesi esiwawabhekile >
< start="319.21" dur="2.04"> zikhona ohlwini lwakho. >
< start="321.25" dur="3.22"> UJakobe isahluko sokuqala, amavesi ayisithupha okuqala. >
< start="324.47" dur="4.07"> Futhi iBhayibheli likusho lokhu lapho likhuluma ngakho >
< start="328.54" dur="2.33"> ukubhekana nezinkinga zakho. >
< start="330.87" dur="2.35"> Okokuqala, uJakobe 1: 1 usho lokhu. >
< start="333.22" dur="5"> UJakobe, inceku kaNkulunkulu neyeNkosi uJesu Kristu, >
< start="338.86" dur="4.18"> ezizweni eziyi-12 ezihlakazekele phakathi kwezizwe, imikhonzo. >
< start="343.04" dur="2.23"> Manje ake ngime lapha umzuzu bese ngithi >
< start="345.27" dur="2.95"> lokhu kungeniswa okushayelwa phansi kakhulu >
< start="348.22" dur="1.71"> yanoma iyiphi incwadi esebhayibhelini. >
< start="349.93" dur="2.01"> Ngoba uyazi ukuthi wayengubani uJames? >
< start="351.94" dur="3.073"> Wayengumnakwabo kaJesu. >
< start="355.013" dur="1.507"> Ngabe usho ukuthini ngalokho? >
< start="356.52" dur="2.19"> Kusho ukuthi wayeyindodana kaMariya noJosefu. >
< start="358.71" dur="2.899"> UJesu wayeyindodana kaMariya kuphela. >
< start="361.609" dur="4.591"> Wayengeyona indodana kaJosefa ngoba uNkulunkulu wayenguyise kaJesu. >
< start="366.2" dur="2.47"> Kepha ibhayibheli lisitshela ukuthi uMariya noJoseph >
< start="368.67" dur="3.52"> saba nezingane eziningi kamuva, futhi zize zisinikeze amagama abo. >
< start="372.19" dur="2.87"> UJames wayengeyena umKristu. >
< start="375.06" dur="2.27"> Wayengeyena umlandeli kaKristu. >
< start="377.33" dur="3.54"> Wayengakholelwa ukuthi umnewabo wayenguMesiya >
< start="380.87" dur="1.78"> phakathi nayo yonke inkonzo kaJesu. >
< start="382.65" dur="1.29"> Wayengabaza. >
< start="383.94" dur="3.14"> Futhi uzobona lokho, mfowethu omncane ongakholwayo >
< start="387.08" dur="3.22"> kumfowethu osekhulile, kunjalo, lokho kuzocaca kahle. >
< start="390.3" dur="3.81"> Yini leyenta Jakobe wakholwa kuJesu Khristu? >
< start="395.67" dur="4.42"> Ngenkathi uJesu ebuya ekufeni wahambahamba >
< start="400.09" dur="1.96"> UJakobe wambona ezinye izinsuku ezingama-40. >
< start="402.05" dur="3.79"> waba yikholwa futhi kamuva waba ngumholi >
< start="405.84" dur="2.09"> eSontweni laseJerusalema. >
< start="407.93" dur="3.82"> Ngakho-ke uma noma ubani enelungelo lokushiya amagama, yilomlisa. >
< start="411.75" dur="4.06"> Wayengasho nje, uJames, umgilwa owakhula noJesu. >
< start="415.81" dur="2.95"> UJakobe, umfowabo kaJesu ngamzali munye. >
< start="418.76" dur="3.87"> UJames, umngani kaJesu omkhulu ekhula. >
< start="422.63" dur="1.47"> Lezo zinhlobo zezinto, kepha yena akazenzi. >
< start="424.1" dur="2.68"> Umane athi uJames, inceku kaNkulunkulu. >
< start="426.78" dur="4.97"> Akadonseli isikhundla, akakhuthazi ukuba kwakhe. >
< start="431.75" dur="2.24"> Kepha bese evesini lesibili, uqala ukungena >
< start="433.99" dur="5"> lo magazini wokuqala wenhloso kaNkulunkulu ezinkingeni zakho. >
< start="439.07" dur="1.86"> Ake ngikufundele. >
< start="440.93" dur="2.41"> Uthi, lapho zonke izinhlobo zezilingo >
< start="444.2" dur="5"> hlanganisa ezimpilweni zakho, ungabacasuli njengabangeneleli, >
< start="449.52" dur="3.15"> kepha mamukele njengabangani. >
< start="452.67" dur="2.82"> Yazi ukuthi bazovivinya ukholo lwakho, >
< start="455.49" dur="4.8"> futhi ukhiqize ngaphakathi kuwe ikhono lokukhuthazela. >
< start="460.29" dur="4.32"> Kepha makuqhubeke lokho kuze kufike lokho kukhuthazela >
< start="464.61" dur="5"> ukhule ngokugcwele, futhi uzoba ngumuntu >
< start="470.01" dur="5"> wobuntu obuvuthiwe nobuqotho >
< start="475.11" dur="2.71"> engenabala obuthakathaka. >
< start="477.82" dur="2.24"> Lokho ukuhunyushwa kwePhillips >
< start="480.06" dur="2.73"> kaJakobe isahluko sokuqala, amavesi amabili kuya kwayisithupha. >
< start="482.79" dur="3.377"> Manje, uthi lapho zonke izinhlobo zezilingo zingena empilweni yakho >
< start="486.167" dur="2.963"> futhi bayangena empilweni yakho, uthe, ungabacasuli >
< start="489.13" dur="1.69"> njengabangeneleli, mamukeleni njengabangane. >
< start="490.82" dur="2.57"> Uthi, unezinkinga, ujabule. >
< start="493.39" dur="2.09"> Unezinkinga, thokozani. >
< start="495.48" dur="1.807"> Unezinkinga, ukumamatheka. >
< start="499.51" dur="0.87"> Manje, ngiyazi ukuthi ucabangani. >
< start="500.38" dur="1.94"> Uyahamba, uyangidina? >
< start="502.32" dur="3.15"> Kungani kufanele ngijabule nge-COVID-19? >
< start="505.47" dur="5"> Kungani kufanele ngazamukele lezi zivivinyo empilweni yami? >
< start="510.6" dur="2.31"> Kungenzeka kanjani lokho? >
< start="512.91" dur="3.74"> Ukhiye walesi simo sonke sokulondolozwa >
< start="516.65" dur="2.85"> isimo sengqondo esihle phakathi kwenhlekelele >
< start="519.5" dur="3.65"> yizwi eliqaphelekayo, yizwi eliqaphelekayo. >
< start="523.15" dur="2.19"> Uthe, lapho zonke lezi zinhlobo zezilingo >
< start="525.34" dur="2.99"> hlanganisa ezimpilweni zakho, ungabacasuli njengabangeneleli, >
< start="528.33" dur="4.89"> kodwa ubamukele njengabangane, bese uqaphela, uqaphele, >
< start="533.22" dur="3.75"> beza ukuzohlola ukholo lwakho. >
< start="536.97" dur="3.839"> Futhi-ke uyaqhubeka, lokho ozovele ukukhiqiza ezimpilweni zabo. >
< start="540.809" dur="5"> Lokho akusho lapha ukuthi impumelelo yakho ekusingatheni >
< start="545.99" dur="4.44"> amasonto aphambi kwethu kulesi bhubhane se-COVID-19 >
< start="550.43" dur="2.87"> manje sekuzungeze umhlaba, futhi ngokwanda >
< start="553.3" dur="3.11"> Izizwe ziyavala, futhi ziyavalwa >
< start="556.41" dur="2.31"> izindawo zokudlela futhi bavala izitolo, >
< start="558.72" dur="1.89"> futhi bavala izikole, >
< start="560.61" dur="1.57"> futhi bavala amasonto, >
< start="562.18" dur="1.69"> futhi bavala noma iyiphi indawo >
< start="563.87" dur="3.86"> lapho abantu bebuthana khona, futhi njengalapha e-Orange County, >
< start="567.73" dur="4.29"> lapho esingavunyelwe khona ukuhlangana nanoma ngubani kulenyanga. >
< start="572.02" dur="3.75"> Uthi, impumelelo yakho ekusingatheni lezi zinkinga >
< start="575.77" dur="3.49"> kuzonqunywa ngokuqonda kwakho. >
< start="580.56" dur="3.24"> Futhi ngesimo sakho sengqondo ngalezi zinkinga. >
< start="583.8" dur="3.69"> Yilokho okwaziyo, yilokho okwaziyo. >
< start="587.49" dur="3.79"> Manje, into yokuqala kule ndima ngifuna ukuba uyiqaphele >
< start="591.28" dur="3.957"> ukuthi uNkulunkulu usinikeza izikhumbuzo ezine ngezinkinga. >
< start="595.237" dur="2.253"> Ungafuna ukubhala lezi phansi. >
< start="597.49" dur="2.07"> Izikhumbuzo ezine ngezinkinga empilweni yakho, >
< start="599.56" dur="2.35"> okubandakanya ubunzima esibhekene nabo njengamanje. >
< start="601.91" dur="5"> Okokuqala, uthi okokuqala, izinkinga azinakugwenywa. >
< start="607.42" dur="2.34"> Izinkinga azinakugwenywa. >
< start="609.76" dur="1.04"> Manje, ukusho kanjani lokho? >
< start="610.8" dur="4.33"> Uthi, lapho kuza zonke izinhlobo zezilingo. >
< start="615.13" dur="4.41"> Akasho uma zonke izinhlobo zezilingo zivela, usho ukuthi zizokwenzeka nini. >
< start="619.54" dur="1.72"> Ungathembela. >
< start="621.26" dur="3.27"> Leli akusilo izulu lapho konke kuphelele khona. >
< start="624.53" dur="2.66"> Lona uMhlaba lapho yonke into ephukile. >
< start="627.19" dur="2.05"> Futhi uthi uzoba nezinkinga, >
< start="629.24" dur="3.44"> uzoba nobunzima, ungathembela kukho, >
< start="635.05" dur="2.99"> Manje, lena akuyona into uJames athi yedwa. >
< start="638.04" dur="1.62"> Kuyo yonke iBhayibhile kuyasho. >
< start="639.66" dur="2.77"> UJesu wathi emhlabeni uzoba nezilingo >
< start="642.43" dur="3.68"> nezilingo, futhi uyoba nosizi. >
< start="646.11" dur="2.29"> Uthe uzoba nezinkinga empilweni. >
< start="648.4" dur="3.07"> Manje kungani simangala lapho sinezinkinga? >
< start="651.47" dur="1.632"> UPeter uthi ungamangali >
< start="653.102" dur="2.558"> lapho udlula ekuvivinyweni ngomlilo. >
< start="655.66" dur="1.786"> Uthe ungenzi sengathi yinto entsha. >
< start="657.446" dur="2.744"> Wonke umuntu ubhekana nezikhathi ezinzima. >
< start="660.19" dur="2.04"> Impilo inzima. >
< start="662.23" dur="2.53"> Lokhu akulona izulu, lo nguMhlaba. >
< start="664.76" dur="3.18"> Akekho umuntu ozivikelayo, akekho noyedwa, >
< start="667.94" dur="2.94"> akekho owafakwa, akekho okhululwa. >
< start="670.88" dur="1.73"> Uthi uzoba nezinkinga >
< start="672.61" dur="2.78"> ngoba ayinakugwenywa. >
< start="675.39" dur="3.84"> Uyazi, ngikhumbula ngesinye isikhathi lapho ngangisekolishi. >
< start="679.23" dur="2.27"> Eminyakeni eminingi edlule, bengibhekana nakho >
< start="681.5" dur="1.71"> ezinye izikhathi ezinzima ngempela. >
< start="683.21" dur="3.09"> Futhi ngaqala ukuthandaza, ngathi, "Nkulunkulu, nginike ukubekezela." >
< start="686.3" dur="2.91"> Futhi esikhundleni sezilingo ziba ngcono, baba zimbi kakhulu. >
< start="689.21" dur="2.22"> Futhi-ke ngathi, "Nkulunkulu, ngidinga ukubekezela ngempela," >
< start="691.43" dur="1.72"> futhi izinkinga zaba zimbi ngokwengeziwe. >
< start="693.15" dur="2.43"> Futhi-ke ngathi, "Nkulunkulu, ngidinga ukubekezela ngempela," >
< start="695.58" dur="2.93"> futhi baba sibi kakhulu. >
< start="698.51" dur="1.77"> Kwakuqhubeka ini? >
< start="700.28" dur="1.82"> Hhayi, ekugcineni ngabona ukuthi ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, >
< start="702.1" dur="2.64"> Bengibekezelela kakhulu kunangesikhathi sokuqala kwami, >
< start="704.74" dur="2.07"> ukuthi indlela uNkulunkulu wayengifundisa ngayo ukubekezela >
< start="706.81" dur="3.2"> Kwakudlula kulobunzima. >
< start="710.01" dur="2.85"> Manje, izinkinga azilona uhlobo oluthile lwezifundo ezikhethiwe >
< start="712.86" dur="2.44"> ukuthi unokhetho okufanele uluthathe empilweni. >
< start="715.3" dur="2.863"> Cha, bayadingeka, awukwazi ukuphuma kubo. >
< start="719.01" dur="3.71"> Ukuze uthole iziqu esikoleni sempilo, >
< start="722.72" dur="1.96"> uzohamba udlule esikoleni sokungqongqoza kanzima. >
< start="724.68" dur="2.87"> Uzobhekana nezinkinga, azinakugwenywa. >
< start="727.55" dur="1.35"> Yilokho iBhayibheli elikushoyo. >
< start="728.9" dur="2.43"> Okwesibili okushiwo yiBhayibheli ngezinkinga yilokhu. >
< start="731.33" dur="3.923"> Izinkinga ziyahlukahluka, lokho kusho ukuthi azifani zonke. >
< start="735.253" dur="2.817"> Awutholi inkinga efanayo ngokulandelana. >
< start="738.07" dur="1.89"> Uthola eziningi ezahlukahlukene. >
< start="739.96" dur="2.11"> Hhayi ukuthi uthola ama-em, kodwa uthola ehlukile. >
< start="742.07" dur="5"> Uthi lapho uvivinya, lapho unezinkinga zazo zonke izinhlobo. >
< start="748.25" dur="2.09"> Ungakujikeleza lokho uma uthatha amanothi. >
< start="750.34" dur="3.54"> Lapho zonke izinhlobo zezilingo zingena empilweni yakho. >
< start="753.88" dur="3.25"> Uyazi, ngingumlimi, futhi ngake ngenza isifundo, >
< start="757.13" dur="2.32"> futhi ngithole ukuthi uhulumeni lapha >
< start="759.45" dur="2.18"> e-United States yahlukaniswa >
< start="761.63" dur="3.493"> Izinhlobo ezingafani ezingama-205 zokhula. >
< start="765.123" dur="4.767"> Ngicabanga ukuthi ama-80% awo akhula engadini yami. (ehleka) >
< start="769.89" dur="2.52"> Imvamisa ngicabanga ukuthi lapho ngitshala imifino, >
< start="772.41" dur="2.85"> Kufanele ngikhokhise ukungena kweWarren's Weed Farm. >
< start="775.26" dur="3.62"> Kepha kunezinhlobo eziningi zokhula, >
< start="778.88" dur="1.82"> futhi kunezinhlobo eziningi zezilingo, >
< start="780.7" dur="1.76"> kunezinhlobo eziningi zezinkinga. >
< start="782.46" dur="2.282"> Beza ngobukhulu bonke, beza ngemidwebo yonke. >
< start="784.742" dur="2.898"> Kunokunambitheka okungaphezulu kwama-31. >
< start="787.64" dur="2.75"> Leli gama lapha, zonke izinhlobo, lapho lisho khona >
< start="790.39" dur="1.55"> kukhona zonke izinhlobo zezilingo empilweni yakho, >
< start="791.94" dur="4.26"> empeleni esiGrekini kusho okuxubile. >
< start="796.2" dur="2.795"> Ngamanye amagama, ziningi izithunzi zokucindezela >
< start="798.995" dur="2.205"> empilweni yakho, ungavuma lokho? >
< start="801.2" dur="1.9"> Kunemithunzi eminingi yokucindezela. >
< start="803.1" dur="1.62"> Zonke azifani. >
< start="804.72" dur="2.67"> Kukhona ukucindezela kwezezimali, kunokucindezela okuhlobene, >
< start="807.39" dur="2.37"> kunokucindezelwa kwempilo, kukhona ukucindezela ngokomzimba, >
< start="809.76" dur="1.62"> kunengcindezi yesikhathi. >
< start="811.38" dur="5"> Ukhuluma ukuthi yonke imibala ehlukene. >
< start="816.41" dur="2.82"> Kepha uma uphuma uyothenga imoto futhi ufuna >
< start="819.23" dur="3.44"> umbala wesiko, khona-ke kufanele ulinde. >
< start="822.67" dur="2.98"> Futhi-ke lapho kwenziwa, khona-ke uthola umbala wakho ngokwezifiso. >
< start="825.65" dur="2.01"> Empeleni lelo igama elisetshenziswe lapha. >
< start="827.66" dur="4.99"> Umbala wangokwezifiso, izilingo ezinhlobonhlobo empilweni yakho. >
< start="832.65" dur="2.14"> UNkulunkulu ubavumela ngesizathu. >
< start="834.79" dur="3.07"> Ezinye zezinkinga zakho zenziwa ngokwezifiso. >
< start="837.86" dur="1.842"> Abanye babo sonke nje esibahlanganyele ndawonye, >
< start="839.702" dur="2.908"> njengalesi, COVID-19. >
< start="842.61" dur="1.95"> Kepha uthi izinkinga ziyahlukahluka. >
< start="844.56" dur="2.845"> Futhi engikushoyo yilapho ukuthi ziyehluka ngobukhulu. >
< start="847.405" dur="3.143"> Ngamanye amagama, banjani kanzima. >
< start="850.548" dur="3.792"> Ziyahluka ngokuvama, futhi lokho kungakanani. >
< start="854.34" dur="1.421"> Asazi ukuthi lokhu kuzogcina isikhathi eside kangakanani. >
< start="855.761" dur="2.699"> Asazi ukuthi kuzoba nzima kanjani. >
< start="858.46" dur="2.197"> Ngabona isibonakaliso ngolunye usuku esasithi, >
< start="860.657" dur="3.98"> "Yonke imvula kumele ingene kukho konke impilo >
< start="864.637" dur="2.743"> "kodwa lokhu kuyahlekisa." (ehleka) >
< start="867.38" dur="1.9"> Futhi ngicabanga ukuthi leyo yindlela >
< start="869.28" dur="1.77"> abantu abaningi bazizwa njengamanje. >
< start="871.05" dur="1.92"> Lokhu kuyahlekisa. >
< start="872.97" dur="3.07"> Izinkinga azinakugwenywa futhi ziyahlukahluka. >
< start="876.04" dur="2.86"> Izinto zesithathu uJames azisho ngakho asishaqeki >
< start="878.9" dur="2.87"> Izinkinga azilindelekile. >
< start="881.77" dur="1.6"> Abalindeleki. >
< start="883.37" dur="4.01"> Uthi lapho ukulingwa kuhlangana empilweni yakho, >
< start="887.38" dur="2.05"> uma uthatha amanothi, ukokele lelo binzana. >
< start="889.43" dur="3.13"> Bayangena empilweni yakho. >
< start="892.56" dur="3.28"> Bheka, akukho nkinga esefika lapho uyidinga >
< start="895.84" dur="1.6"> noma lapho ungayidingi. >
< start="897.44" dur="1.97"> Kufika nje lapho ufuna ukuza. >
< start="899.41" dur="1.97"> Lokho yingxenye yesizathu ukuthi kuyinkinga. >
< start="901.38" dur="3.05"> Izinkinga ziza ngesikhathi esingahambisani kakhulu nazo. >
< start="904.43" dur="1.582"> Wake wazizwa njengenkinga >
< start="906.012" dur="2.778"> wangena empilweni yakho, uya, hhayi manje. >
< start="908.79" dur="2.51"> Ngempela, njengamanje? >
< start="911.3" dur="3.82"> Lapha eSaddleback Church, besisemkhankasweni omkhulu >
< start="915.12" dur="2.45"> ukuphupha ngekusasa. >
< start="917.57" dur="3.27"> Futhi ngokuzumayo i-coronavirus ishaya. >
< start="920.84" dur="2.06"> Futhi ngiyahamba, hhayi manje. >
< start="922.9" dur="1.673"> (chuckles) Hhayi manje. >
< start="926.75" dur="3.073"> Wake waba nethayela elisicaba lapho usephuze? >
< start="931.729" dur="2.361"> Awutholi uthayi osicaba lapho uthola isikhathi esiningi. >
< start="934.09" dur="1.823"> Ushesha ukuya kwenye indawo. >
< start="937.12" dur="4.08"> Kufana nokhula lwezingane engutsheni yakho entsha >
< start="941.2" dur="4.952"> njengoba uphuma ngokuzibandakanya obalulekile kusihlwa. >
< start="946.152" dur="2.918"> Noma uhlukanisa ibhulukwe lakho ngaphambi kokukhuluma. >
< start="949.07" dur="2.55"> Empeleni kwenzeka kimi ngesinye isikhathi >
< start="951.62" dur="1.713"> ngeSonto kade kwenzeka. >
< start="956" dur="4.64"> Abanye abantu, banesineke kakhulu, >
< start="960.64" dur="1.77"> abakwazi ukulinda umnyango ovunguzayo. >
< start="962.41" dur="1.72"> Bafanele nje, kufanele bakwenze, >
< start="964.13" dur="2.38"> Kufanele bakwenze manje, kufanele bakwenze manje. >
< start="966.51" dur="3.99"> Ngikhumbula eminyakeni eminingi edlule ngangiseJapan, >
< start="970.5" dur="3.34"> futhi ngangimi esitimeleni esingaphansi komgwaqo >
< start="973.84" dur="2.55"> ukufika, futhi lapho kuvulwa, iminyango ivulekile, >
< start="976.39" dur="3.33"> futhi insizwa yaseJapan ngokushesha >
< start="979.72" dur="4.49"> uhlanza kimi njengoba ngangimi lapho. >
< start="984.21" dur="5"> Futhi ngacabanga, kungani mina, kungani manje? >
< start="989.9" dur="3.583"> Abalindeleki, beza uma ungadingi i-em. >
< start="994.47" dur="2.94"> Awukwazi ukubikezela izinkinga empilweni yakho. >
< start="997.41" dur="3.69"> Manje qaphela, ithi lapho zonke izinhlobo zezilingo, nini, >
< start="1001.1" dur="3"> akunakugwenywa, zonke izinhlobo, ziyahlukahluka, >
< start="1004.1" dur="3.98"> hlangana nempilo yakho, ukuthi akulindeleki, >
< start="1008.08" dur="3.213"> uthi ungabacasuli njengabangeneleli. >
< start="1012.19" dur="1.01"> Uthini lapha? >
< start="1013.2" dur="2.16"> Yebo, ngizochaza lokhu ngokuningiliziwe. >
< start="1015.36" dur="2.6"> Kepha nayi into yesine iBhayibheli elikushoyo ngezinkinga. >
< start="1017.96" dur="2.553"> Izinkinga zinenhloso. >
< start="1021.4" dur="2.69"> Izinkinga zinenhloso. >
< start="1024.09" dur="3.07"> UNkulunkulu unenhloso kukho konke. >
< start="1027.16" dur="2.72"> Ngisho nezinto ezimbi ezenzeka empilweni yethu, >
< start="1029.88" dur="2.16"> UNkulunkulu angakhipha okuhle kubo. >
< start="1032.04" dur="1.64"> Akumele uNkulunkulu adale zonke izinkinga. >
< start="1033.68" dur="2.62"> Iningi lezinkinga esizibangela zona. >
< start="1036.3" dur="2.1"> Abantu bathi, kungani abantu begula? >
< start="1038.4" dur="3.69"> Isizathu sokuqala ukuthi asikwenzi lokho uNkulunkulu athi masikwenze. >
< start="1042.09" dur="3.02"> Uma sidle lokho uNkulunkulu athi masikudle, >
< start="1045.11" dur="2.71"> uma silele njengoba uNkulunkulu ethi masiphumule, >
< start="1047.82" dur="3.28"> uma sisebenza njengoba uNkulunkulu asitshela ukuthi sisebenze, >
< start="1051.1" dur="3.16"> ukube besingavumeli imizwa engemihle ezimpilweni zethu >
< start="1054.26" dur="2.06"> njengoba kusho uNkulunkulu, uma silalela uNkulunkulu, >
< start="1056.32" dur="2.65"> ngeke sibe nezinkinga zethu eziningi. >
< start="1058.97" dur="3.07"> Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi cishe i-80% yezinkinga zempilo >
< start="1062.04" dur="3.57"> kulelizwe, eMelika, kubangelwa yilokho okubizwa ngokuthi >
< start="1065.61" dur="3"> ukukhetha okungapheli kwendlela yokuphila. >
< start="1068.61" dur="3.05"> Ngamanye amagama, asikwenzi into efanele. >
< start="1071.66" dur="1.14"> Asenzi into enempilo. >
< start="1072.8" dur="2.66"> Imvamisa senza into ezenzakalisayo. >
< start="1075.46" dur="2.58"> Kepha akushoyo lapha, izinkinga zinenhloso. >
< start="1078.04" dur="3.53"> Uthi lapho uhlangabezana nezinkinga, >
< start="1081.57" dur="3.46"> qaphela ukuthi beza ukuzokhiqiza. >
< start="1085.03" dur="3.56"> Kokelezela lelo binzana, bazokhiqiza. >
< start="1088.59" dur="3.22"> Izinkinga zingakhiqiza. >
< start="1091.81" dur="2.23"> Manje, azakhiqizi ngokuzenzakalelayo. >
< start="1094.04" dur="3.06"> Leli gciwane le-COVID, uma ngingaphenduli ngosuku olulungile, >
< start="1097.1" dur="3.35"> ngeke ikhiqize noma yini enhle empilweni yami. >
< start="1100.45" dur="2.17"> Kepha uma ngiphendula ngendlela efanele, >
< start="1102.62" dur="2.25"> ngisho nezinto ezingezinhle kakhulu empilweni yami >
< start="1104.87" dur="3.89"> kungakhiqiza ukukhula futhi kusizakale nesibusiso, >
< start="1108.76" dur="2.23"> empilweni yakho nasempilweni yami. >
< start="1110.99" dur="2.26"> Beza ukuzokhiqiza. >
< start="1113.25" dur="4.59"> Usho lapha ukuthi ukuhlupheka nengcindezi >
< start="1117.84" dur="5"> nosizi, yebo, ngisho nokugula kungafeza okuthile >
< start="1123.42" dur="2.913"> zenani uma sikuvumela. >
< start="1127.363" dur="3.887"> Konke kukhetho lwethu, konke kusimo sethu sengqondo. >
< start="1131.25" dur="4.043"> UNkulunkulu usebenzisa ubunzima ezimpilweni zethu. >
< start="1136.9" dur="2.33"> Uthi, kuhle, ukukwenza kanjani lokho? >
< start="1139.23" dur="4.04"> UNkulunkulu ubusebenzisa kanjani ubunzima nezinkinga empilweni yethu? >
< start="1143.27" dur="3.29"> Yebo, ngiyabonga ngokubuza, ngoba isigaba esilandelayo >
< start="1146.56" dur="1.75"> noma ingxenye elandelayo yamavesi ithi >
< start="1148.31" dur="2.61"> ukuthi uNkulunkulu uzisebenzisa ngezindlela ezintathu. >
< start="1150.92" dur="3.09"> Izindlela ezintathu, uNkulunkulu usebenzisa izinkinga empilweni yakho izindlela ezintathu. >
< start="1154.01" dur="4.18"> Okokuqala, izinkinga zivivinya ukholo lwami. >
< start="1158.19" dur="2.03"> Manje, ukholo lwakho lufana nomsipha. >
< start="1160.22" dur="3.8"> Umsipha awukwazi ukuqiniswa ngaphandle kokuthi uhlolwe, >
< start="1164.02" dur="3.3"> ngaphandle kokuthi weluliwe, ngaphandle kokuthi ifakwe ngaphansi kwengcindezi. >
< start="1167.32" dur="4.99"> Awukhulisi izicubu eziqinile ngokungenzi lutho. >
< start="1172.31" dur="3.09"> Uhlakulela izicubu eziqinile ngokuzelula >
< start="1175.4" dur="2.53"> futhi sibaqinise futhi sibavivinye >
< start="1177.93" dur="2.7"> nokuzicindezela kuze kube semkhawulweni. >
< start="1180.63" dur="5"> Ngakho-ke uthi kunezinkinga eza ukuvivinya ukholo lwami. >
< start="1185.88" dur="4.38"> Uthi qaphela ukuthi beza ukuzohlola ukholo lwakho. >
< start="1190.26" dur="3.28"> Manje, lelo gama lokuvivinya khona lapho, lelo yigama >
< start="1193.54" dur="5"> ezikhathini zebhayibheli elalisetshenziselwa ukucwilisa izinsimbi. >
< start="1198.61" dur="3.05"> Futhi into obungayenza ukuthi uthathe insimbi eyigugu >
< start="1201.66" dur="1.768"> njengesiliva noma igolide noma enye into, >
< start="1203.428" dur="2.932"> ubuyifaka ebhodweni elikhulu, ubelishisa >
< start="1206.36" dur="2.54"> emazingeni okushisa aphezulu kakhulu, ngani? >
< start="1208.9" dur="1.17"> Emazingeni okushisa aphezulu, >
< start="1210.07" dur="3.34"> konke ukungcola sekushisiwe. >
< start="1213.41" dur="4.05"> Futhi into kuphela esele igolide elimsulwa >
< start="1217.46" dur="1.946"> noma isiliva elihlanzekile. >
< start="1219.406" dur="3.164"> Ligama lesiGrikhi lapha lokuhlola. >
< start="1222.57" dur="4.54"> Ungumlilo wokucwilisa lapho uNkulunkulu ebeka ukushisa >
< start="1227.11" dur="1.705"> futhi ikuvumela lokho ezimpilweni zethu, >
< start="1228.815" dur="3.345"> kushisa izinto ezingabalulekile. >
< start="1232.16" dur="2.94"> Uyazi ukuthi kuzokwenzekani emasontweni ambalwa ezayo? >
< start="1235.1" dur="2.134"> Izinto ezithi sonke besicabanga ukuthi zibalulekile, >
< start="1237.234" dur="1.726"> sizobona, hmm, ngihlangane >
< start="1238.96" dur="1.273"> kulungile ngaphandle kwalokho. >
< start="1241.1" dur="2.51"> Sizohlela kabusha izinto eziza kuqala kithi, >
< start="1243.61" dur="2.41"> ngoba izinto zizoshintsha. >
< start="1246.02" dur="4.22"> Manje, isibonelo zakudala sokuthi izinkinga zivivinya kanjani ukholo lwakho >
< start="1251.17" dur="4.02"> yizindaba ezikhuluma ngoJobe ezisebhayibhelini. >
< start="1255.19" dur="1.75"> Kukhona incwadi ephelele ephathelene noJobe. >
< start="1256.94" dur="3.49"> Uyazi, uJobe wayengumuntu ocebile kunabo bonke eBhayibhelini, >
< start="1260.43" dur="2.74"> kwathi ngosuku olulodwa, walahlekelwa yikho konke. >
< start="1263.17" dur="2.82"> Walahlekelwa ngumndeni wakhe wonke, waphulukana nayo yonke ingcebo yakhe, >
< start="1265.99" dur="3.97"> ulahlekelwe bonke abangane bakhe, abashokobezi bahlasela umndeni wakhe, >
< start="1269.96" dur="4.567"> waba nesifo esingalapheki, esibuhlungu kakhulu >
< start="1276.283" dur="3.437"> lokho akunakwelashwa. >
< start="1279.72" dur="1.323"> Kulungile, ukuphela kwakhe. >
< start="1282.109" dur="3.721"> Futhi nokho uNkulunkulu wayevivinya ukholo lwayo. >
< start="1285.83" dur="3.27"> Futhi kamuva uNkulunkulu umbuyisela empeleni >
< start="1289.1" dur="3.423"> lokho ayenakho ngaphambi kokudlula esivivinyweni esikhulu. >
< start="1293.59" dur="2.82"> Ngesinye isikhathi ngifunde isicaphuna ndawo ndawo kudala >
< start="1296.41" dur="2.92"> wathi abantu banjengezikhwama zewathi. >
< start="1299.33" dur="1.34"> Awazi ngempela ukuthi yini eku-em >
< start="1300.67" dur="2.67"> uze uphonsa 'emanzini ashisayo. >
< start="1303.34" dur="3.09"> Futhi-ke ungabona okungaphakathi kubo. >
< start="1306.43" dur="2.77"> Wake waba nolunye lwalezozinsuku zamanzi ashisayo? >
< start="1309.2" dur="3.763"> Wake waba nelilodwa lalawo masonto noma izinyanga ezishisayo zamanzi? >
< start="1313.82" dur="3.78"> Sisesimweni samanzi ashisayo njengamanje. >
< start="1317.6" dur="2.41"> Futhi okusazophuma kuwe yikho okungaphakathi kuwe. >
< start="1320.01" dur="1.33"> Kufana nokuxubha kwamazinyo. >
< start="1321.34" dur="4.15"> Uma ngineshubhu lokuxubha izinyo futhi ngiyicindezela, >
< start="1325.49" dur="1.18"> yini ezophuma? >
< start="1326.67" dur="0.9"> Uthi, kuhle, izinyo lamazinyo. >
< start="1327.57" dur="1.65"> Cha, hhayi ngempela. >
< start="1329.22" dur="1.95"> Kungasho amazinyo ngaphandle, >
< start="1331.17" dur="1.67"> kepha yayingaba nesoso se-marinara >
< start="1332.84" dur="2.6"> noma ibhotela lamantongomane noma imayonnaise ngaphakathi. >
< start="1335.44" dur="2.92"> Yini ezophuma uma ifakwa ngaphansi kwengcindezi >
< start="1338.36" dur="1.403"> noma yini ekuyo. >
< start="1341.13" dur="3.603"> Futhi ezinsukwini ezizayo njengoba usebenza ne-COVID virus, >
< start="1346.266" dur="2.224"> okuzovela kuwe yilokho okungaphakathi kuwe. >
< start="1348.49" dur="2.24"> Futhi uma ugcwala ulaka, lokho kuzophuma. >
< start="1350.73" dur="2.23"> Futhi uma ugcwele ukukhungatheka, lokho kuzophuma. >
< start="1352.96" dur="3.79"> Futhi uma ugcwele intukuthelo noma ukukhathazeka noma umuzwa wecala >
< start="1356.75" dur="3.46"> noma amahloni noma ukungavikeleki, lokho kuzovela. >
< start="1360.21" dur="4"> Uma ugcwala ukwesaba lokho, noma yini ingaphakathi kuwe >
< start="1364.21" dur="3.52"> yini ezophuma lapho ingcindezi ifakwa kuwe. >
< start="1367.73" dur="1.44"> Futhi yilokho akushoyo lapha, >
< start="1369.17" dur="2.23"> ukuthi izinkinga zivivinya ukholo lwami. >
< start="1371.4" dur="5"> Uyazi, eminyakeni edlule, ngahlangana nendoda endala impela >
< start="1376.98" dur="3.23"> engqungqutheleni eminyakeni eminingi edlule emuva eMpumalanga. >
< start="1380.21" dur="1.74"> Ngicabanga ukuthi kwakunguTennessee. >
< start="1381.95" dur="3.91"> Futhi yena, le ndoda endala yangitshela ukuthi kuhlukaniswa kanjani >
< start="1387.13" dur="4.8"> kwaba inzuzo enkulu kunazo zonke empilweni yakhe. >
< start="1391.93" dur="2.017"> Futhi ngathi, “Kulungile, ngifuna ukuzwa le ndaba. >
< start="1393.947" dur="1.523"> "Ngitshele konke ngakho." >
< start="1395.47" dur="1.67"> Futhi ukuthi kwakuyini ayesebenzile >
< start="1397.14" dur="2.823"> ekubumbeni izinkuni impilo yakhe yonke. >
< start="1400.83" dur="2.41"> Wayekade engumboni impilo yakhe yonke. >
< start="1403.24" dur="3.34"> Kepha ngolunye usuku ngesikhathi sokuwohloka komnotho, >
< start="1406.58" dur="3.607"> umphathi wakhe ungene ngaphakathi maqede wamemezela, "Uxoshiwe." >
< start="1411.19" dur="3.54"> Futhi bonke ubuchwepheshe bakhe baphuma ngomnyango. >
< start="1414.73" dur="4.62"> Futhi wayekhulelwe eneminyaka engama-40 enomfazi >
< start="1419.35" dur="3.85"> nomndeni futhi alikho elinye ithuba lomsebenzi eduze kwakhe, >
< start="1423.2" dur="2.923"> futhi kwaba nokuwohloka komnotho okwenzeka ngaleso sikhathi. >
< start="1427.03" dur="3.5"> Futhi wayedangele, futhi wayesaba. >
< start="1430.53" dur="1.77"> Abanye kini bangazizwa ngaleyo ndlela njengamanje. >
< start="1432.3" dur="1.58"> Kungenzeka ukuthi usuvele ulahliwe. >
< start="1433.88" dur="1.76"> Mhlawumbe wesaba ukuthi uzoba njalo >
< start="1435.64" dur="2.63"> elele phakathi nale nkinga. >
< start="1438.27" dur="2.45"> Futhi wayecindezeleke kakhulu, wayenovalo. >
< start="1440.72" dur="1.827"> Uthe, ngibhale lokhu phansi, wathi, “Ngizwe sengathi >
< start="1442.547" dur="3.97"> "umhlaba wami wawa ngosuku engixoshwe ngalo. >
< start="1446.517" dur="2.2"> "Kepha ngithe uma ngibuyela ekhaya, ngatshela umkami ngokwenzekile, >
< start="1448.717" dur="3.57"> "wabuza, 'Manje uzokwenzenjani?' >
< start="1452.287" dur="2.98"> "Futhi ngathi, kahle-ke selokhu ngaxoshwa, >
< start="1455.267" dur="3.9"> "Ngizovele ngenze engangifuna ukukwenza." >
< start="1461.007" dur="1.61"> "Ngizobolekwa imali ekhaya >
< start="1462.617" dur="2.413"> "futhi ngizongena ebhizinisini lokwakha." >
< start="1465.03" dur="2.887"> Futhi wangitshela, “Uyazi, Rick, umsebenzi wami wokuqala >
< start="1467.917" dur="4.13"> "bekungokwakhiwa kwezimoto ezimbili ezincane." >
< start="1472.965" dur="2.115"> Yilokho akwenza. >
< start="1475.08" dur="4.267"> Kepha wathi, "Ingakapheli iminyaka emihlanu, bengingumbhali wezigidi eziningi." >
< start="1480.21" dur="2.99"> Igama laleyo ndoda, indoda ebengikhuluma nayo, >
< start="1483.2" dur="3.5"> kwakunguWallace Johnson, nebhizinisi awaqala ngalo >
< start="1486.7" dur="4.39"> ngemuva kokuxoshwa wabizwa ngokuthi yiHoliday Inns. >
< start="1491.09" dur="1.44"> Amaholide Eholide. >
< start="1492.53" dur="2.877"> UWallace ungitshele ukuthi, "URick, namuhla, uma ngingathola >
< start="1495.407" dur="3.13"> "umuntu ongixoshile, bengingathanda ngobuqotho >
< start="1498.537" dur="2.143"> "ngiyabonga ngokwenzile." >
< start="1500.68" dur="2.56"> Ngaleso sikhathi lapho kwenzeka, ngangingaqondi >
< start="1503.24" dur="2.83"> kungani ngaxoshwa, kungani ngachithwa. >
< start="1506.07" dur="3.94"> Kepha kamuva ngabona ukuthi kwakuwukungeniswa kukaNkulunkulu >
< start="1510.01" dur="4.483"> futhi necebo elihle lokungingenisa emsebenzini wokukhethwa kwakhe. >
< start="1515.76" dur="3.05"> Izinkinga zinenhloso. >
< start="1518.81" dur="1.17"> Banenhloso. >
< start="1519.98" dur="4.18"> Yazi ukuthi bazokhiqiza, futhi enye yezinto zokuqala >
< start="1524.16" dur="3.984"> bakhiqiza ukholo olukhulu, bavivinya ukholo lwakho. >
< start="1528.144" dur="3.226"> Inombolo yesibili, nansi inzuzo yesibili yezinkinga. >
< start="1531.37" dur="3.27"> Izinkinga zithuthukisa ukukhuthazela kwami. >
< start="1534.64" dur="1.52"> Bakhulisa ukukhuthazela kwami. >
< start="1536.16" dur="2.23"> Leyo ngxenye elandelayo yesisho, ithi >
< start="1538.39" dur="5"> lezi zinkinga ziza ukuthuthukisa ukukhuthazela. >
< start="1543.45" dur="2.33"> Bakhulisa ukukhuthazela empilweni yakho. >
< start="1545.78" dur="1.91"> Yini imiphumela yezinkinga empilweni yakho? >
< start="1549.21" dur="2.82"> Kungokoqobo amandla okubhekana nengcindezi. >
< start="1552.03" dur="2.253"> Namuhla sikubiza ngokuthi ukuqina. >
< start="1555.12" dur="1.79"> Amandla okugoqa emuva. >
< start="1556.91" dur="3.197"> Futhi esinye sezimfanelo ezinkulu kunazo zonke ingane okudingeka zifunde >
< start="1560.107" dur="3.473"> futhi wonke umuntu omdala kudingeka afunde ukukhuthala. >
< start="1563.58" dur="2.92"> Ngoba wonke umuntu uyawa, wonke umuntu uyakhubeka, >
< start="1566.5" dur="2.05"> wonke umuntu ubhekana nezikhathi ezinzima, >
< start="1568.55" dur="3.31"> wonke umuntu uyagula ngezikhathi ezihlukile. >
< start="1571.86" dur="2.39"> Wonke umuntu unokwehluleka empilweni yabo. >
< start="1574.25" dur="2.7"> Uyisingatha kanjani ingcindezi. >
< start="1576.95" dur="3.613"> Ukukhuthazela, uyaqhubeka nokuqhubeka nokunamathela. >
< start="1581.52" dur="1.99"> Hhayi-ke, ufunda kanjani ukwenza lokho? >
< start="1583.51" dur="3.53"> Ufunda kanjani ukubhekana nengcindezi? >
< start="1587.04" dur="2.28"> Ngokuhlangenwe nakho, leyo ukuphela kwendlela. >
< start="1589.32" dur="4.93"> Awufundi ukuphatha ingcindezi encwadini. >
< start="1594.25" dur="4.02"> Awufundi ukuthi ungamelana kanjani nengcindezi kumhlangano. >
< start="1598.27" dur="3.76"> Ufunda ukubhekana nengcindezi ngokuba ngaphansi kwengcindezi. >
< start="1602.03" dur="2.53"> Futhi awazi ukuthi yini okukuwe >
< start="1604.56" dur="3.063"> kuze kube yilapho ubekwe kuleso simo. >
< start="1609.77" dur="2.7"> Ngonyaka wesibili weSaddleback Church, 1981, >
< start="1612.47" dur="1.36"> Ngadlula enkathini yokudangala >
< start="1613.83" dur="2.823"> lapho maviki onke bengifuna ukuhoxa. >
< start="1617.64" dur="3.88"> Futhi ngangifuna ukuyeka njalo ngeSonto ntambama. >
< start="1621.52" dur="3.14"> Kodwa-ke, bengibhekene nobunzima empilweni yami, >
< start="1624.66" dur="2.3"> kodwa nokho ngangibeka unyawo olulodwa phambi kolunye >
< start="1626.96" dur="3.19"> njengoNkulunkulu, ungangitholi ngakhe ibandla elikhulu, >
< start="1630.15" dur="1.973"> kepha uNkulunkulu, ngithole kuleli sonto. >
< start="1633.01" dur="2.1"> Futhi angizange ngidikibale. >
< start="1635.11" dur="2.22"> Ngijabule kakhulu ukuthi angiyekanga. >
< start="1637.33" dur="3.09"> Kepha ngijabule kakhulu ukuthi uNkulunkulu akazange angilahle ithemba. >
< start="1640.42" dur="1.46"> Ngoba lokho kwakuyivivinyo. >
< start="1641.88" dur="5"> Futhi ngalowo nyaka wokuqulwa kwecala, ngakhula ngokomoya >
< start="1647.51" dur="3.56"> namandla obuhlobo nangokomzwelo nangokwengqondo >
< start="1651.07" dur="4.28"> lokho kwangivumela eminyakeni eminingi kamuva ukujikisa zonke izinhlobo zamabhola >
< start="1655.35" dur="4.64"> futhi ubhekane nezingcindezi ezinkulu zokucindezelwa emehlweni omphakathi >
< start="1659.99" dur="2.01"> ngoba ngadlula kulowo nyaka >
< start="1662" dur="3.363"> sobunzima obucashile, omunye emva komunye. >
< start="1666.51" dur="5"> Uyazi, iMelika ibilithandana kalula. >
< start="1672.57" dur="2.113"> Sithanda ukusebenziseka lula. >
< start="1675.593" dur="3.187"> Ezinsukwini nasemavikini azayo kule nkinga, >
< start="1678.78" dur="2.58"> kuzoba nezinto eziningi eziphazamisayo. >
< start="1681.36" dur="1.13"> Okungalungile. >
< start="1682.49" dur="2.95"> Futhi yini esizoyenza nathi >
< start="1685.44" dur="2.503"> lapho konke kungahambi kahle, >
< start="1688.96" dur="2.52"> lapho kufanele uqhubeke nje ukuqhubeka >
< start="1691.48" dur="2.1"> lapho ungazizwa ufuna ukuqhubeka. >
< start="1693.58" dur="5"> Uyazi, inhloso kanxantathu noma inhloso yomashi >
< start="1698.71" dur="3.1"> empeleni akuphathelene nesivinini, ukuthi ufika ngokushesha kangakanani lapho, >
< start="1701.81" dur="1.86"> kumayelana nokukhuthazela. >
< start="1703.67" dur="2.34"> Ngabe uyawuqeda umncintiswano? >
< start="1706.01" dur="2.43"> Uzilungiselela kanjani lezo zinhlobo zezinto? >
< start="1710.57" dur="3.487"> Ngakho-ke lapho welule ezinsukwini ezizayo, >
< start="1714.057" dur="2.213"> ungakhathazeki ngakho, ungakhathazeki ngakho. >
< start="1716.27" dur="3.02"> Izinkinga zithuthukisa ukukhuthazela kwami. >
< start="1719.29" dur="3.21"> Izinkinga zinenhloso, zinenhloso. >
< start="1722.5" dur="2.6"> Into yesithathu uJames asitshela yona ngezinkinga >
< start="1725.1" dur="3.68"> esidlula kukho ukuthi izinkinga zivuthisa isimilo sami. >
< start="1728.78" dur="3.68"> Futhi ukusho lokhu evesini lesine sikaJakobe isahluko sokuqala. >
< start="1732.46" dur="4.18"> Uthi kodwa, vumela inqubo iqhubeke >
< start="1736.64" dur="4.49"> uze ube ngabantu abanobuntu obuvuthiwe >
< start="1741.13" dur="3.663"> nobuqotho obungenazindawo ezibuthakathaka. >
< start="1746.3" dur="1.32"> Ubungeke uthande ukuba nakho lokho? >
< start="1747.62" dur="2.42"> Ubungeke uthande ukuzwa abantu bethi, uyazi, >
< start="1750.04" dur="3.32"> ukuthi lowesifazane akanazindawo ezibuthakathaka esimweni sakhe. >
< start="1753.36" dur="4.53"> Leya ndoda, leyo ndoda ayinazindawo ezibuthakathaka isimilo sayo. >
< start="1757.89" dur="3.04"> Ngabe uluthola kanjani lolo hlobo lomlingiswa ovuthiwe? >
< start="1760.93" dur="4.58"> Vumela inqubo iqhubeke uze ube ngabantu, >
< start="1765.51" dur="3.38"> abesilisa nabesifazane, abanezinhlamvu ezivuthiwe >
< start="1768.89" dur="3.33"> nobuqotho obungenazindawo ezibuthakathaka. >
< start="1772.22" dur="2.6"> Uyazi, bekukhona ucwaningo oludumile olwenziwe abaningi, >
< start="1774.82" dur="4"> eminyakeni eminingi edlule eRussia engikukhumbulayo ukubhala phansi, >
< start="1778.82" dur="4.08"> futhi kwakusemphumela wokuthi izimo zokuphila ezahlukahlukene kanjani >
< start="1782.9" dur="5"> kuthinte isikhathi eside noma isikhathi sokuphila kwezilwane ezahlukene. >
< start="1789.11" dur="3.6"> Futhi-ke babeka ezinye izilwane zibe lula, >
< start="1792.71" dur="2.91"> futhi bafaka ezinye izilwane kwezinye ubunzima >
< start="1795.62" dur="1.89"> nezimo ezinesihluku. >
< start="1797.51" dur="2.87"> Futhi ososayensi bathola ukuthi izilwane >
< start="1800.38" dur="2.22"> ezazibekwe ezintofontofo >
< start="1802.6" dur="2.88"> nezimo ezilula, izimo, >
< start="1805.48" dur="4.73"> lezo zimo zokuphila, empeleni zaba buthaka. >
< start="1810.21" dur="4.41"> Ngenxa yokuthi izimo zazilula kakhulu, baba buthaka >
< start="1814.62" dur="2.22"> futhi usengozini yokugula. >
< start="1816.84" dur="5"> Futhi labo ababesesimweni esikahle bafa kungekudala >
< start="1821.9" dur="2.418"> kunalabo abavunyelwe ukuzwa >
< start="1824.318" dur="3.105"> ubunzima obujwayelekile bempilo. >
< start="1828.72" dur="1.163"> Akujabulisi lokho? >
< start="1830.81" dur="2.2"> Yini eyiqiniso ngezilwane engiqinisekile ukuthi iyiqiniso >
< start="1833.01" dur="1.94"> wesimilo sethu, futhi. >
< start="1834.95" dur="4.92"> Nakwisiko laseNtshonalanga ikakhulukazi emhlabeni wanamuhla, >
< start="1839.87" dur="3.38"> sikuthole kulula ngezindlela eziningi. >
< start="1843.25" dur="1.973"> Ukuphila izimpilo lula. >
< start="1846.94" dur="1.71"> Injongo kaNkulunkulu yokuqala empilweni yakho >
< start="1848.65" dur="2.67"> ukukwenza ube njengoJesu Kristu ngesimo. >
< start="1851.32" dur="1.87"> Ukucabanga njengoKristu, ukwenza njengoKristu, >
< start="1853.19" dur="3.94"> ukuphila njengoKristu, ukuthanda njengoKristu, >
< start="1859.33" dur="3.62"> Futhi uma lokho kuyiqiniso, futhi ibhayibheli likusho lokhu kaninginingi, >
< start="1862.95" dur="2.13"> khona-ke uNkulunkulu uzokuhambisa ezintweni ezifanayo >
< start="1865.08" dur="4.304"> uJesu adlula kukho ukukhulisa isimilo sakho. >
< start="1869.384" dur="2.786"> Uthi, kuhle, unjani uJesu? >
< start="1872.17" dur="3.8"> UJesu uluthando nenjabulo nokuthula nokubekezela nomusa, >
< start="1875.97" dur="2.34"> isithelo sikaMoya, zonke lezo zinto. >
< start="1878.31" dur="1.4"> Futhi uNkulunkulu uzikhiqiza kanjani lezo? >
< start="1879.71" dur="2.9"> Ngokusibeka esimweni esiphambene. >
< start="1882.61" dur="3.76"> Sifunda ukubekezela lapho silingwa ukuba siphelelwe isineke. >
< start="1886.37" dur="3.37"> Sifunda uthando lapho sibekwa phambi kwabantu abangenaluthando. >
< start="1889.74" dur="2.49"> Sifunda injabulo phakathi kosizi. >
< start="1892.23" dur="4.67"> Sifunda ukulinda futhi sibe nalolo hlobo lokubekezela >
< start="1896.9" dur="1.56"> lapho kufanele silinde. >
< start="1898.46" dur="3.423"> Sifunda umusa lapho silingwa ukuba sibe nobugovu. >
< start="1902.77" dur="3.66"> Ezinsukwini ezizayo, kuzoba isilingo kakhulu >
< start="1906.43" dur="2.83"> ukuvele uzingeke engxenyeni engaphansi, ukudonsa futhi, >
< start="1909.26" dur="2.54"> futhi ngathi, sizosinakekela. >
< start="1911.8" dur="4.22"> Mina, uqobo, nami, umndeni wami, thina sobane futhi akusekho >
< start="1916.02" dur="2.14"> bese ukhohlwa ngabo bonke abanye abantu. >
< start="1918.16" dur="2.62"> Kepha lokho kuzonciphisa umphefumulo wakho. >
< start="1920.78" dur="2.51"> Uma uzoqala ukucabanga abanye abantu >
< start="1923.29" dur="3.254"> nokusiza labo ababuthakathaka, asebekhulile >
< start="1926.544" dur="4.026"> nalabo abanezimiso zepreexisting, >
< start="1930.57" dur="3.47"> futhi uma uzofinyelela, umphefumulo wakho uyokhula, >
< start="1934.04" dur="3.34"> inhliziyo yakho izokhula, uzoba ngumuntu ongcono >
< start="1937.38" dur="5"> ekugcineni kwale nkinga ukwedlula indlela owawunayo ekuqaleni, kulungile? >
< start="1943.52" dur="2.98"> Uyabona, uNkulunkulu, lapho efuna ukwakha isimilo sakho, >
< start="1946.5" dur="1.37"> angasebenzisa izinto ezimbili. >
< start="1947.87" dur="2.92"> Angasebenzisa iZwi lakhe, iqiniso liyasiguqula, >
< start="1950.79" dur="3.56"> futhi angasebenzisa izimo, okunzima kakhulu. >
< start="1954.35" dur="4"> Manje, uNkulunkulu angathanda ukusebenzisa indlela yokuqala, iZwi. >
< start="1958.35" dur="1.63"> Kepha asihlali sililalela iZwi, >
< start="1959.98" dur="3.77"> ngakho usebenzisa izimo ukuze sinake. >
< start="1963.75" dur="4.6"> Futhi kunzima kakhulu, kepha kuvame ukusebenza kakhudlwana. >
< start="1968.35" dur="3.23"> Manje, uthi, kulungile, kulungile, Rick, ngiyakuthola, >
< start="1971.58" dur="4.22"> ukuthi izinkinga ziyahlukahluka futhi zinenhloso, >
< start="1975.8" dur="3.18"> futhi balapha ukuvivinya ukholo lwami, futhi bazoba >
< start="1978.98" dur="2.47"> zonke izinhlobo ezahlukene, futhi azifiki lapho ngifuna 'em. >
< start="1981.45" dur="4.393"> Futhi uNkulunkulu angasebenzisa 'em ukukhulisa isimilo sami nokuvulela impilo yami. >
< start="1986.95" dur="1.72"> Manje yini okufanele ngiyenze? >
< start="1988.67" dur="4.94"> Ezinsukwini ezimbalwa ezizayo nasemavikini mhlawumbe ezinyangeni ezizayo >
< start="1993.61" dur="3.75"> njengoba sibhekene nale nkinga ye-coronavirus sindawonye, >
< start="1997.36" dur="4.09"> kufanele ngiphendule kanjani ezinkingeni empilweni yami? >
< start="2001.45" dur="1.98"> Futhi angikhulumi nje ngegciwane. >
< start="2003.43" dur="2.747"> Ngikhuluma ngezinkinga ezizofika njengomphumela >
< start="2006.177" dur="5"> yokungasebenzi noma izingane zisekhaya >
< start="2011.26" dur="3.12"> noma zonke ezinye izinto eziphazamisa impilo >
< start="2014.38" dur="1.553"> njengoba bekulokhu kwenzeka. >
< start="2017.04" dur="2.24"> Kufanele ngiphendule kanjani ezinkingeni zempilo yami? >
< start="2019.28" dur="2.9"> Yebo, futhi, uJames ucacile. >
< start="2022.18" dur="3.39"> futhi usinika izinto ezintathu ezisebenzayo, >
< start="2025.57" dur="4.45"> izimpendulo ezinkulu, kepha yizimpendulo ezilungile. >
< start="2030.02" dur="1.32"> Eqinisweni, lapho ngikutshela okokuqala, >
< start="2031.34" dur="2.21"> uzohamba, kufanele ungidlale. >
< start="2033.55" dur="3.07"> Kepha kunezimpendulo ezintathu, zonke ziqala ngo-R. >
< start="2036.62" dur="2.76"> Impendulo yokuqala athi uma uku >
< start="2039.38" dur="4.46"> uhamba ngezikhathi ezinzima, thokozani. >
< start="2046.25" dur="1.73"> Lokho kuzwakala kungafanele. >
< start="2047.98" dur="2.29"> Angisho ukuthokoza ngalenkinga. >
< start="2050.27" dur="1.69"> Ngilandele kulokhu umzuzu nje. >
< start="2051.96" dur="3.54"> Esho akubheke njengensolo yenjabulo. >
< start="2055.5" dur="2.69"> Phatha lezi zinkinga njengabangane. >
< start="2058.19" dur="1.78"> Manje, ungangiqondi. >
< start="2059.97" dur="3.14"> Akusho ukuthi kunamanga. >
< start="2063.11" dur="3.57"> Akasho ukuthi beka ukumamatheka kwepulasitiki, >
< start="2066.68" dur="2.33"> yenza sengathi konke kulungile futhi akulungile, >
< start="2069.01" dur="1.36"> ngoba akunjalo. >
< start="2070.37" dur="3.12"> Pollyanna, Little Orphan Annie, ilanga >
< start="2073.49" dur="3.512"> izophuma kusasa, ingahle iphume kusasa. >
< start="2077.002" dur="3.568"> Akasho ukuthi aphike okungokoqobo, angikho nakancane. >
< start="2080.57" dur="2.76"> Akasho ukuthi yi-isochist. >
< start="2083.33" dur="2.87"> Hawu mfana, ngidlula ebuhlungwini. >
< start="2086.2" dur="1.72"> UZimu ubuzonda ubuhlungu njengawe. >
< start="2087.92" dur="2.1"> O, ngiyahlupheka, ubani. >
< start="2090.02" dur="3.49"> Futhi unale nkinga yokufela ukholo, futhi uyazi, >
< start="2093.51" dur="1.937"> Ngiba nalo muzwa ongokomoya kuphela lapho ngizwa kabi. >
< start="2095.447" dur="2.983"> Cha, cha, cha, uNkulunkulu akafuni ukuba umfel 'ukholo. >
< start="2098.43" dur="1.54"> UNkulunkulu akafuni ukuthi ube nakho >
< start="2099.97" dur="3.453"> isimo sengqondo sokukhathazeka ngobuhlungu. >
< start="2104.74" dur="2.5"> Uyazi, ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ebengikudlula >
< start="2107.24" dur="3.21"> isikhathi esinzima impela futhi umngane wayezama ukuba nomusa >
< start="2110.45" dur="2.307"> bathi, "Uyazi, Rick, hloka >
< start="2112.757" dur="1.86"> "ngoba izinto zingaba zimbi kakhulu." >
< start="2115.61" dur="2.14"> Futhi qagela ukuthi, baba banjani. >
< start="2117.75" dur="2.23"> Lokho kwakungekho lusizo nhlobo. >
< start="2119.98" dur="2.225"> Bengijabule futhi baba bengixakile. >
< start="2122.205" dur="1.105"> (amazwibela) >
< start="2123.31" dur="4.588"> Ngakho-ke akuphathelene nokucabanga okuyiphutha kukaPollyanna. >
< start="2127.898" dur="3.352"> Uma ngenza umdlandla, ngizoba nomdlandla. >
< start="2131.25" dur="2.88"> Cha, cha, cha, cha, kuningi, kujule kakhulu kunalokho. >
< start="2134.13" dur="5"> Asithokozi, asilaleli, asijabuli ngenkinga. >
< start="2140.17" dur="5"> Siyajabula ngenkinga, ngenkathi sisenkingeni, >
< start="2145.71" dur="2.13"> kusenezinto eziningi okufanele zijabule ngazo. >
< start="2147.84" dur="2.92"> Hhayi inkinga uqobo lwayo, kodwa ezinye izinto >
< start="2150.76" dur="2.514"> ukuthi sithokoze ngazo ezinkingeni. >
< start="2153.274" dur="2.836"> Kungani sikwazi ukujabula ngisho nasenkingeni? >
< start="2156.11" dur="2.54"> Ngoba siyazi ukuthi kunenhloso ngakho. >
< start="2158.65" dur="1.74"> Ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu akasoze asishiya. >
< start="2160.39" dur="2.97"> Ngoba sazi izinto eziningi ezahlukahlukene. >
< start="2163.36" dur="1.81"> Siyazi ukuthi uNkulunkulu unenjongo. >
< start="2165.17" dur="4.58"> Phawula uthi uyibheka njengensolo yenjabulo. >
< start="2169.75" dur="1.98"> Zungelezela igama elithi. >
< start="2171.73" dur="4.8"> Cabanga izindlela zokwenza umqondo wakho ngamabomu. >
< start="2176.53" dur="2.22"> Unokuguqulwa kwesimo >
< start="2178.75" dur="1.71"> ukuthi uzokwenza lapha. >
< start="2180.46" dur="3.869"> Kungumqondo wakho ukukhetha? >
< start="2184.329" dur="3.201"> KumaHubo 34 ivesi lokuqala, uthi >
< start="2187.53" dur="3.69"> Ngiyoyibonga iNkosi ngaso sonke isikhathi. >
< start="2191.22" dur="1.39"> Ngazo zonke izikhathi. >
< start="2192.61" dur="0.92"> Futhi uthi ngizokwenza. >
< start="2193.53" dur="2.48"> Kukhetho lwentando, isinqumo. >
< start="2196.01" dur="1.66"> Kuzinikela, ukukhetha. >
< start="2197.67" dur="4.08"> Manje, uzohamba kulezi zinyanga ezizayo >
< start="2201.75" dur="2.4"> nganoma yisiphi isimo esihle noma isimo esibi. >
< start="2204.15" dur="2.7"> Uma umbono wakho mubi, uzozenzela >
< start="2206.85" dur="2.35"> futhi bonke abanye abaseduze kwakho badabukisa. >
< start="2209.2" dur="3.15"> Kepha uma isimo sakho sengqondo sihle, ukukhetha kwakho ukujabula. >
< start="2212.35" dur="1.76"> Uthi, ake sibheke ohlangothini oluqhakazile. >
< start="2214.11" dur="3.09"> Asitholeni izinto esingambonga uNkulunkulu ngazo. >
< start="2217.2" dur="2.15"> Futhi masiqonde ukuthi noma kubi, >
< start="2219.35" dur="2.88"> UNkulunkulu angakhipha okuhle kokubi. >
< start="2222.23" dur="2.29"> Ngakho-ke yenza ukulungisa isimo. >
< start="2224.52" dur="3.25"> Ngeke ngibe munyu kule nkinga. >
< start="2227.77" dur="3.23"> Ngizoba ngcono kule nkinga. >
< start="2231" dur="4.39"> Ngizokhetha, kungukukhetha kwami ​​ukujabula. >
< start="2235.39" dur="3.41"> Kulungile, inombolo yesibili, i-R yesibili iyisicelo. >
< start="2238.8" dur="4.08"> Futhi lokho kucela uNkulunkulu ukuhlakanipha. >
< start="2242.88" dur="3.29"> Lokhu yilokho ofuna ukukwenza noma kunini lapho usenkingeni. >
< start="2246.17" dur="2.39"> Ufuna ukucela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. >
< start="2248.56" dur="2.1"> Isonto eledlule, uma ulalele umlayezo weviki eledlule, >
< start="2250.66" dur="2.72"> futhi uma uwuphuthele, buyela ku-inthanethi bese ubuka lowo mlayezo >
< start="2253.38" dur="5"> ukuyenza idlule esigodini segciwane ngaphandle kokwesaba. >
< start="2260.09" dur="2.15"> Kukhetho lwakho ukujabula, >
< start="2262.24" dur="2.733"> kodwa-ke ubuza uNkulunkulu ukuhlakanipha. >
< start="2265.89" dur="2.13"> Futhi ucela ukuhlakanipha kuNkulunkulu futhi uyakhuleka >
< start="2268.02" dur="1.51"> futhi uthandazela ngezinkinga zakho. >
< start="2269.53" dur="2.99"> Ivesi lesikhombisa lisho lokhu kuJakobe owodwa. >
< start="2272.52" dur="4.83"> Uma kule nqubo noma ngubani kini angazi ukuthi uhlangana kanjani >
< start="2277.35" dur="4.05"> noma iyiphi inkinga ethile, lokhu kuphume ekuhunyushweni kwePhillips. >
< start="2281.4" dur="2.24"> Uma kwinqubo noma ngubani kini angazi ukuthi uhlangana kanjani >
< start="2283.64" dur="3.44"> noma iyiphi inkinga ethile kuphela onayo kufanele ubuze uNkulunkulu >
< start="2287.08" dur="2.65"> opha bonke ngesandla esivulekile >
< start="2289.73" dur="2.6"> ngaphandle kokubenza bazizwe benecala. >
< start="2292.33" dur="3.45"> Futhi ungaqiniseka ukuthi ukuhlakanipha okudingekayo >
< start="2295.78" dur="1.963"> uzokunikwa. >
< start="2298.65" dur="2.18"> Bathi kungani kuzo zonke izinto bengizocela ukuhlakanipha >
< start="2300.83" dur="1.35"> phakathi kwenkinga? >
< start="2303.29" dur="2.07"> Ngakho-ke ufunda kuyo. >
< start="2305.36" dur="1.57"> Ngakho-ke ungafunda enkingeni, >
< start="2306.93" dur="1.48"> yingakho ucela ukuhlakanipha. >
< start="2308.41" dur="4.26"> Kuyasiza kakhulu uma uzoyeka ukubuza ukuthi kungani, >
< start="2312.67" dur="3.04"> kungani lokhu kwenzeka, bese uqala ukubuza ukuthi, >
< start="2315.71" dur="1.45"> ufuna ngifundeni? >
< start="2318.09" dur="1.92"> Ufuna ngibe yiphi? >
< start="2320.01" dur="2.27"> Ngingakhula kanjani kulokhu? >
< start="2322.28" dur="2.17"> Ngingaba kanjani ngowesifazane ongcono? >
< start="2324.45" dur="4.51"> Ngingaba kanjani indoda engcono kule nkinga? >
< start="2328.96" dur="1.32"> Yebo, ngiyahlolwa. >
< start="2330.28" dur="1.53"> Angikhathazeki ngokuthi kungani. >
< start="2331.81" dur="1.71"> Kungani ngisho kungenandaba. >
< start="2333.52" dur="3.77"> Okubalulekile ukuthi yini, ngizoba yini, >
< start="2337.29" dur="3.7"> futhi yini engizoyifunda kulesi simo? >
< start="2340.99" dur="2.71"> Futhi ukuze wenze lokho, kufanele ubuze ukuhlakanipha. >
< start="2343.7" dur="2.56"> Ngakho-ke uthi noma nini lapho udinga ukuhlakanipha, cela uNkulunkulu nje, >
< start="2346.26" dur="1.61"> UNkulunkulu uzokupha. >
< start="2347.87" dur="2.2"> Ngakho-ke uthi, Nkulunkulu, ngidinga ukuhlakanipha njengomama. >
< start="2350.07" dur="3.23"> Izingane zami zizoba sekhaya ngenyanga ezayo. >
< start="2353.3" dur="2.22"> Ngidinga ukuhlakanipha njengobaba. >
< start="2355.52" dur="3.48"> Ngihola kanjani lapho imisebenzi yethu isengozini >
< start="2359" dur="1.553"> futhi angikwazi ukusebenza njengamanje? >
< start="2362.05" dur="1.45"> Cela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. >
< start="2363.5" dur="1.84"> Musa ukubuza ukuthi kungani, kodwa ubuze ukuthi yini. >
< start="2365.34" dur="2.99"> Ngakho-ke okokuqala ujabule, uthola isimo sengqondo esihle >
< start="2368.33" dur="3.14"> yokuthi ngizobonga uNkulunkulu hhayi inkinga, >
< start="2371.47" dur="3.14"> kodwa ngizokubonga uNkulunkulu enkingeni. >
< start="2374.61" dur="2.92"> Ngoba okuhle kukaNkulunkulu ngisho nalapho impilo imunca. >
< start="2377.53" dur="2.137"> Kungakho ngibiza lolu chungechunge >
< start="2379.667" dur="5"> "Ukholo lwangempela olusebenza lapho impilo ingasebenzi." >
< start="2385.41" dur="1.473"> Lapho impilo ingasebenzi. >
< start="2387.96" dur="1.69"> Ngakho-ke ngiyathokoza futhi ngiyacela. >
< start="2389.65" dur="4.32"> Into yesithathu uJames athi ayenze ukuphumula. >
< start="2393.97" dur="4.83"> Yebo, vele ushaye nje, ungazitholi >
< start="2398.8" dur="3.86"> konke kugcwele inqwaba yezinzwa. >
< start="2402.66" dur="2.64"> Musa ukucindezelwa kakhulu ukuthi awukwazi ukwenza lutho. >
< start="2405.3" dur="1.33"> Ungakhathazeki ngekusasa. >
< start="2406.63" dur="2.83"> Unkulunkulu uthi ngizokunakekela, ngethembe. >
< start="2409.46" dur="2.42"> Uthemba uNkulunkulu ukuthi wazi okungcono kakhulu. >
< start="2411.88" dur="2.17"> Usebenzisana naye. >
< start="2414.05" dur="4.84"> Awusifinqanisi isimo obhekene naso. >
< start="2418.89" dur="3.07"> Kepha uthi nje, Nkulunkulu, ngiphumula. >
< start="2421.96" dur="2.28"> Angingabazi. >
< start="2424.24" dur="1.87"> Angingabazi. >
< start="2426.11" dur="2.76"> Ngizokuthemba kulesi simo. >
< start="2428.87" dur="3.15"> Ivesi lesishiyagalombili ivesi lokugcina esizolibuka. >
< start="2432.02" dur="1.26"> Yebo, sizobheka eyodwa ngomzuzu. >
< start="2433.28" dur="5"> Kepha ivesi lesishiyagalombili lithi, kepha kufanele ucele ngokholo lwangempela >
< start="2438.9" dur="2.49"> ngaphandle kokungabaza okuyimfihlo. >
< start="2441.39" dur="1.86"> Yini oyicelayo ekukholweni okuqotho? >
< start="2443.25" dur="1.57"> Cela ukuhlakanipha. >
< start="2444.82" dur="2.07"> Bese uthi, Nkulunkulu, ngidinga ukuhlakanipha, futhi ngiyabonga >
< start="2446.89" dur="1.26"> uzonginika ukuhlakanipha. >
< start="2448.15" dur="2.89"> Ngiyabonga, unginika ukuhlakanipha. >
< start="2451.04" dur="3.06"> Ungakhathazeki, ungangabazi, >
< start="2454.1" dur="2.57"> kepha yikhiphe kuNkulunkulu. >
< start="2456.67" dur="5"> Uyazi, kusho iBhayibheli, ngaphambili lapho ngiveza >
< start="2461.67" dur="3.24"> ukuthi washo lezi zinhlobo eziningi zezinkinga. >
< start="2464.91" dur="1.8"> Uyazi, sikhuluma ngamagama ahlukahlukene, >
< start="2466.71" dur="2.23"> eziningi, izinhlobo eziningi zezinkinga. >
< start="2468.94" dur="2.81"> Leli gama ngesiGreek, izinhlobo eziningi zenkinga, >
< start="2471.75" dur="3.11"> yigama elifanayo elimbozwe kuPeter wokuQala >
< start="2474.86" dur="1.97"> Isahluko sesine, ivesi lesine elathi >
< start="2476.83" dur="4.11"> UNkulunkulu unezinhlobo eziningi zomusa ongakunika zona. >
< start="2480.94" dur="3.35"> Izinhlobo eziningi zomusa kaNkulunkulu. >
< start="2484.29" dur="5"> Kuyinto efanayo enemikhakha eminingi, ehlukahlukene, njengedayimane. >
< start="2489.339" dur="1.694"> Uthini lapho? >
< start="2492.28" dur="2.08"> Kuzo zonke izinkinga onazo, >
< start="2494.36" dur="2.87"> kunomusa ovela kuNkulunkulu otholakalayo. >
< start="2497.23" dur="5"> Kuzo zonke izinhlobo eziningi zokulingwa nosizi >
< start="2502.74" dur="4.5"> nobunzima, kukhona uhlobo lomusa nesihe >
< start="2507.24" dur="2.25"> namandla uNkulunkulu afuna ukukunikeza >
< start="2509.49" dur="2.05"> ukufanisa leyo nkinga ethile. >
< start="2511.54" dur="2.04"> Udinga umusa ngalokhu, udinga umusa ngalokhu, >
< start="2513.58" dur="1"> udinga umusa ngalokhu. >
< start="2514.58" dur="3.76"> UNkulunkulu uthi umusa wami unjengezinto eziningi >
< start="2518.34" dur="1.99"> njengezinkinga obhekene nazo. >
< start="2520.33" dur="1.27"> Manje ngithini? >
< start="2521.6" dur="1.74"> Ngithi zonke izinkinga ezikhona empilweni yakho, >
< start="2523.34" dur="2.44"> kufaka phakathi le nkinga ye-COVID, >
< start="2525.78" dur="4.03"> usathane kusho ukukuhlula ngalezi zinkinga. >
< start="2529.81" dur="4.41"> Kepha uNkulunkulu kusho ukuthi uzokuthuthukisa kulezi zinkinga. >
< start="2534.22" dur="3.543"> Ufuna ukukuhlula, Sathane, kepha uNkulunkulu ufuna ukuthuthukisa wena. >
< start="2539.44" dur="2.12"> Manje, izinkinga eziza empilweni yakho >
< start="2541.56" dur="3.34"> akwenzi ngokuzenzakalelayo ube umuntu ongcono. >
< start="2544.9" dur="2.51"> Abantu abaningi baba ngabantu abababayo abavela ku-em. >
< start="2547.41" dur="3.28"> Akukwenzi ngokuzenzekelayo ube ngumuntu ongcono. >
< start="2550.69" dur="2.96"> Yisimo sakho sengqondo esenza umehluko. >
< start="2553.65" dur="2.86"> Futhi yilapho engifuna ukukunikeza enye into okufanele uyikhumbule. >
< start="2556.51" dur="3.07"> Inombolo yesine, into yesine okufanele uyikhumbule >
< start="2559.58" dur="3.75"> lapho ubhekene nezinkinga ukukhumbula >
< start="2563.33" dur="1.99"> izithembiso zikaNkulunkulu. >
< start="2565.32" dur="1.84"> Khumbula izethembiso zikaNkulunkulu. >
< start="2567.16" dur="1.28"> Lokho kuphansi evesini 12. >
< start="2568.44" dur="1.52"> Ake ngikufundele lesi sithembiso. >
< start="2569.96" dur="2.363"> UJakobe isahluko sokuqala, ivesi 12. >
< start="2573.55" dur="5"> Ubusisiwe umuntu obekezelela ngaphansi kwecala, >
< start="2579.84" dur="2.67"> ngoba lapho esesivivile, >
< start="2582.51" dur="5"> uzokwamukela umqhele wokuphila uNkulunkulu awuthembisile, >
< start="2587.82" dur="2.75"> kukhona izwi, kulabo abamthandayo. >
< start="2590.57" dur="0.833"> Ake ngifunde futhi. >
< start="2591.403" dur="2.057"> Ngifuna ulalele kakhulu. >
< start="2593.46" dur="5"> Ubusisiwe umuntu obekezelela ngaphansi kwecala, >
< start="2598.84" dur="3.36"> obhekana nobunzima, >
< start="2602.2" dur="2.12"> njengesimo esikuso njengamanje. >
< start="2604.32" dur="3.67"> Ubusisiwe umuntu okhuthazayo, obekezelayo, >
< start="2607.99" dur="3.87"> othembela uNkulunkulu, oqhubeka ekholwa ngaphansi kovivinyo, >
< start="2611.86" dur="3.12"> ngoba lapho esemi isivivinyo, siphuma >
< start="2614.98" dur="2.72"> ngasemuva, lesi sivivinyo asihlali ekugcineni. >
< start="2617.7" dur="1.4"> Kukhona ukuphela kwayo. >
< start="2619.1" dur="2.07"> Uzophuma komunye umkhawulo womhubhe. >
< start="2621.17" dur="4.41"> Uzothola umqhele wokuphila. >
< start="2625.58" dur="3.38"> Angazi nokuthi kusho ukuthini lokho, kodwa kuhle. >
< start="2628.96" dur="2.7"> Umqhele wokuphila uNkulunkulu awuthembisile >
< start="2631.66" dur="2.373"> kulabo abamthandayo. >
< start="2635.73" dur="2.32"> Kukhetho lwakho ukujabula. >
< start="2638.05" dur="2.92"> Kukhetho lwakho ukwethemba ukuhlakanipha kukaNkulunkulu >
< start="2640.97" dur="1.72"> esikhundleni sokungabaza. >
< start="2642.69" dur="4.21"> Cela uNkulunkulu akuphe ukuhlakanipha ukuze akusize kulesimo sakho. >
< start="2646.9" dur="3.23"> Bese ucela uNkulunkulu ukuthi ukholo lukhuthazele. >
< start="2650.13" dur="2.27"> Bese uthi, Nkulunkulu, angizukunikezela. >
< start="2652.4" dur="1.793"> Lokhu kuzodlula. >
< start="2655.329" dur="2.111"> Omunye wake wabuzwa, yini okuthandayo >
< start="2657.44" dur="0.833"> ivesi leBhayibheli? >
< start="2659.57" dur="1.273"> Futhi kungani ulithanda lelo vesi? >
< start="2660.843" dur="2.687"> Ngoba uma kufika izinkinga, ngiyazi ukuthi azizelanga ukuzohlala. >
< start="2664.724" dur="1.116"> (amazwibela) >
< start="2665.84" dur="2.88"> Futhi kuyiqiniso kulesi simo esithile. >
< start="2668.72" dur="3.983"> Akuzi ukuhlala, kuzokwenzeka. >
< start="2673.56" dur="2.24"> Manje, ngifuna ukusondela lo mqondo. >
< start="2675.8" dur="3.77"> Inkinga ayigcini nje ukudala izinkinga. >
< start="2679.57" dur="3.23"> Ihlala izembulela, ihlala izembulela. >
< start="2682.8" dur="4.563"> Le nkinga ingaveza eminye imifantu emshadweni wakho. >
< start="2688.77" dur="2.76"> Le nkinga ingaveza eminye imifantu >
< start="2691.53" dur="1.823"> ebuhlotsheni bakho noNkulunkulu. >
< start="2694.26" dur="5"> Le nkinga ingaveza imifantu ethile kwindlela yakho yokuphila, >
< start="2699.29" dur="2.593"> ukuthi indlela uzicindezela ngayo kanzima. >
< start="2702.949" dur="3.181"> Futhi-ke zimisele ukuvumela uNkulunkulu ukuba akhulume nawe >
< start="2706.13" dur="5"> mayelana nezidingo okudingeka zishintshe empilweni yakho, kulungile? >
< start="2711.45" dur="1.7"> Ngifuna ucabange ngalokhu kuleli sonto, >
< start="2713.15" dur="3.44"> futhi ake ngininikeze izinyathelo ezisebenzayo, kulungile? >
< start="2716.59" dur="2.47"> Izinyathelo ezisebenzayo, inombolo yokuqala, ngifuna wena >
< start="2719.06" dur="5"> ukukhuthaza omunye umuntu ukuthi alalele lo mlayezo. >
< start="2724.55" dur="1.25"> Uzokukwenza lokho? >
< start="2725.8" dur="3.603"> Ngabe uzosidlulisela lesi sixhumanisi bese usithumela kumngani? >
< start="2729.403" dur="3.337"> Uma lokhu kukukhuthaze, kudlulise, >
< start="2732.74" dur="2.3"> futhi ube yisikhuthazo kuleli sonto. >
< start="2735.04" dur="4.84"> Wonke umuntu osondele kuwe udinga isikhuthazo ngesikhathi sale nkinga. >
< start="2739.88" dur="1.779"> Ngakho-ke thumela isixhumanisi. >
< start="2741.659" dur="5"> Emasontweni amabili edlule lapho sinesonto kumakhampasi ethu, >
< start="2747.52" dur="3.11"> e-Lake Forest nawo wonke amanye amakhampasi eSaddleback, >
< start="2750.63" dur="3.53"> babalelwa ku-30,000 abantu esontweni. >
< start="2754.16" dur="4.14"> Kepha kuleli sonto eledlule lapho kwadingeka sikhansele izinsizakalo >
< start="2758.3" dur="1.87"> futhi sonke kufanele sibuke ku-inthanethi, ngathi, >
< start="2760.17" dur="3.38"> wonke umuntu uya eqenjini lakho elincane futhi ameme omakhelwane bakho >
< start="2763.55" dur="2.94"> futhi umeme abangani bakho eqenjini lakho elincane, >
< start="2766.49" dur="0.95"> sathola abangu-181,000 >
< start="2767.44" dur="5"> Ama-ISPs amakhaya ethu axhunyiwe kwinkonzo. >
< start="2776.3" dur="3.41"> Lokho kusho ukuthi mhlawumbe isigamu sesigidi sabantu >
< start="2779.71" dur="1.96"> ubuke umyalezo wesonto eledlule. >
< start="2781.67" dur="3.04"> Isigamu sabantu noma ngaphezulu. >
< start="2784.71" dur="3.63"> Ngani, ngoba utshele omunye umuntu ukuthi azibukele. >
< start="2788.34" dur="4.56"> Futhi ngifuna ukukukhuthaza ukuba ube ngufakazi wezindaba ezinhle >
< start="2792.9" dur="2.79"> kuleli sonto ezweni elidinga izindaba ezinhle. >
< start="2795.69" dur="1.4"> Abantu badinga ukuzwa lokhu. >
< start="2797.09" dur="1.18"> Thumela isixhumanisi. >
< start="2798.27" dur="5"> Ngikholwa ukuthi singakhuthaza abantu abayisigidi kuleli sonto >
< start="2803.29" dur="3.8"> uma sonke singadlulisa umyalezo, kulungile? >
< start="2807.09" dur="3.16"> Inombolo yesibili, uma useqenjini elincane, asijahi >
< start="2810.25" dur="3.45"> ukwazi ukuhlangana, okungenani le nyanga, lokho nakanjani. >
< start="2813.7" dur="3.95"> Futhi ngakho-ke ngingakukhuthaza ukuthi usethe umhlangano obonakalayo. >
< start="2817.65" dur="1.79"> Ungaba neqembu eliku-inthanethi. >
< start="2819.44" dur="0.97"> Ukwenza kanjani lokho? >
< start="2820.41" dur="2.63"> Yebo, kukhona imikhiqizo laphaya efana ne-Zoom. >
< start="2823.04" dur="2.52"> Ufuna ukubheka ukuthi, Sondeza, kumahhala. >
< start="2825.56" dur="2.56"> Futhi ungangena lapho utshele wonke umuntu ukuthi enze i-Zoom >
< start="2828.12" dur="1.74"> ocingweni noma ekhompyutheni yabo, >
< start="2829.86" dur="3.58"> futhi ungaxhuma abantu abayisithupha noma abayisishiyagalombili noma abayi-10, >
< start="2833.44" dur="3.15"> futhi ungaba neqembu lakho kuleli sonto ku-Zoom. >
< start="2836.59" dur="3.19"> Futhi niyakwazi ukubonana, njenge-Facebook Live, >
< start="2839.78" dur="2.933"> noma kufana nabanye, niyazi, >
< start="2844.84" dur="5"> yini eku-iPhone uma ubheka i-FaceTime. >
< start="2850.12" dur="1.82"> Hhayi, awukwazi ukukwenza lokho ngeqembu elikhulu, >
< start="2851.94" dur="2.39"> kepha ungakwenza nomuntu oyedwa. >
< start="2854.33" dur="3.52"> Futhi ngakho-ke khuthazana ubuso nobuso ngobuchwepheshe. >
< start="2857.85" dur="2.66"> Manje sinobuchwepheshe obabungatholakali. >
< start="2860.51" dur="3.59"> Ngakho-ke hlola ukusondeza kweqembu elincane le-virtual group. >
< start="2864.1" dur="1.17"> Futhi empeleni lapha ku-inthanethi >
< start="2865.27" dur="1.85"> ungathola neminye imininingwane. >
< start="2867.12" dur="3.244"> Inombolo yesithathu, uma ungekho eqenjini elincane, >
< start="2870.364" dur="4.096"> Ngizokusiza ungene eqenjini eliku-inthanethi kuleli sonto, ngizo. >
< start="2874.46" dur="2.33"> Konke okudingeka ukwenze ukuthumela i-imeyili, >
< start="2880.015" dur="4.815"> PastorRick @ saddleback, igama elilodwa, SADDLEBACK, >
< start="2884.83" dur="2.81"> saddleback.com, futhi ngizokuxhumanisa >
< start="2887.64" dur="2.57"> eqenjini eliku-inthanethi, kulungile? >
< start="2890.21" dur="2.79"> Ngemuva kwalokho qiniseka ukuthi uyingxenye yeSonto leSaddleback >
< start="2893" dur="2.84"> ukufunda incwadi yakho yansuku zonke engiyithumelayo >
< start="2895.84" dur="2.03"> nsuku zonke phakathi nale nhlekelele. >
< start="2897.87" dur="2.1"> Ibizwa nge- "Saddleback Ekhaya." >
< start="2899.97" dur="3.5"> Inezeluleko, inemiyalezo ekhuthazayo, >
< start="2903.47" dur="2.14"> kunezindaba ongazisebenzisa. >
< start="2905.61" dur="1.56"> Into engokoqobo. >
< start="2907.17" dur="2.17"> Sifuna ukuxhumana nawe nsuku zonke. >
< start="2909.34" dur="1.32"> Thola "iSaddleback Ekhaya." >
< start="2910.66" dur="2.69"> Uma ngingenalo ikheli lakho le-imeyili, >
< start="2913.35" dur="1.42"> khona-ke awuyitholi. >
< start="2914.77" dur="2.46"> Futhi ungangithumela i-imeyili ikheli lakho le-imeyili >
< start="2917.23" dur="4.41"> ku-PrinceRick@saddleback.com, futhi ngizokubeka ohlwini, >
< start="2921.64" dur="2.37"> futhi uzothola ukuxhumana kwansuku zonke, >
< start="2924.01" dur="3.76"> iphephandaba lansuku zonke elithi "Saddleback Ekhaya". >
< start="2927.77" dur="2.09"> Ngivele ngifune ukusondela ngaphambi kokuba ngithandaze >
< start="2929.86" dur="2.15"> ngokusho futhi ukuthi ngikuthanda kangakanani. >
< start="2932.01" dur="1.72"> Bengikukhuleka nsuku zonke, >
< start="2933.73" dur="1.9"> futhi ngizoqhubeka ngikuthandazele. >
< start="2935.63" dur="2.68"> Sizodlula kulokhu ndawonye. >
< start="2938.31" dur="2.33"> Lesi akusona ukuphela kwendaba. >
< start="2940.64" dur="3.4"> UNkulunkulu usesesihlalweni sakhe sobukhosi, futhi uNkulunkulu uzokusebenzisa lokhu >
< start="2944.04" dur="4.16"> ukukhulisa ukholo lwakho, ukuletha abantu ekukholweni. >
< start="2948.2" dur="1.8"> Futhi ngubani owaziyo ukuthi kwenzekani. >
< start="2950" dur="3.07"> Singathola imvuselelo ngokomoya kukho konke lokhu >
< start="2953.07" dur="2.66"> ngoba abantu bavame ukuguqukela kuNkulunkulu >
< start="2955.73" dur="1.87"> lapho bedlula ezikhathini ezinzima. >
< start="2957.6" dur="1.09"> Ake ngikuthandazele. >
< start="2958.69" dur="1.66"> Baba ngifuna ukunibonga ngawo wonke umuntu >
< start="2960.35" dur="1.48"> ubani olalele njengamanje. >
< start="2961.83" dur="5"> Kwangathi singawuphila umyalezo kaJakobe isahluko sokuqala, >
< start="2967.39" dur="2.78"> amavesi okuqala ayisithupha noma ayisikhombisa. >
< start="2970.17" dur="4.25"> Kwangathi sifunde ukuthi izinkinga ziyeza, zizokwenzeka, >
< start="2974.42" dur="5"> ziyahlukahluka, zinenhloso, nokuthi uzohamba >
< start="2979.81" dur="2.41"> sizisebenzisele okuhle ezimpilweni zethu uma singakwethemba. >
< start="2982.22" dur="1.49"> Sisize singangabazi. >
< start="2983.71" dur="4"> Sisize sijabule, sicele, >
< start="2987.71" dur="3.53"> futhi ukhumbule izithembiso zakho. >
< start="2991.24" dur="3.45"> Futhi ngithandazela wonke umuntu ukuthi babe nesonto elinempilo. >
< start="2994.69" dur="2.87"> Ngegama likaJesu, amen. >
< start="2997.56" dur="1.07"> Unkulunkulu anibusise, nonke. >
< start="2998.63" dur="1.823"> Dlulisa lokhu komunye umuntu. >